တွေ့ဆုံကြုံကွဲ – Grab Love Story
ကျတော် ၁၀ တန်းအောင်တော့သန်လျင် GTC မှာ civil တက်ခွင့်ရပါတယ်… အထင်တော့မကြီးလိုက်နဲ့နော် လိုက်လို့ရတာဗျ…မိဘတွေကျေးဇူးလေ… သူတို့ကတော့ သူတို့သားလေးကို အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေအကုန်ခံတာပေါ့… ဒါပေမဲ့ ကျတော်က ဘိလပ်မြေနဲ့ ရွံ့တောင်သေသေချာချာခွဲတက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး… စိတ်တော့သိပ်မညစ်ပါဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့သေသေချာချာဝါသနာပါတဲ့ဟာ မှမရှိတာ… တက်ဆိုတော့လဲ တက်ရတာပေါ့ နော့်… အခုလောလောဆယ်တော့၁၀ တန်းပြီးလို့ကဲခဲ့တဲ့ အရှိန်တွေတောင် မပျယ်သေးဘူး… ကဲ … ဘာလိုလိုနဲ့ ကျောင်းစတက်ရမဲ့နေ့ရောက်လာရော…ကျောင်းကိုတော့ ၁ ခါ ၂ ခါ ရောက်ဘူးပါတယ်… ခတ်ဆုတ်ဆုတ်နဲ့ မြို့သစ်တွေကမူလတန်းကျောင်းသာသာပဲရှိတယ်ဗျ… ဒါနဲ့များ GTC တဲ့ … ထားပါ… ဒီနေ့ကျောင်းစတက်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်လွုပ်ရှားမိတယ် … လူပြောများတဲ့ တက္ကသိုလ် ဆိုတာ ဘာကြီးပါလိမ့်ပေါ့ … ဒီလိုပဲ စU်းစားရင်း စU်းစားရင်း နဲ့လျှောက်လာလိုက်တာလမ်းထိပ်ကျောင်းကားစီးရမဲ့ နေရာကိုတောင် ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိလိုက်ဘူး… ဝရိယစွတ်ကောင်းပြီးနည်းနည်းစောနေသေးတော့ တစ်ကောင်တည်း ငေါင်စU်းစU်းနဲ့ဗျာ … အဲ … ခဏကြာတော့မမကြီးနှစ်ယောက်ရောက်လာပါလေရော … ။
ကျတော်ဒျီမှာနေတာဒီလောက်ကြာပြီ သူတို့ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဘူးဗျ… အဲ … နှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကနည်းနည်းလန်းသလားလို့ … အမျိုးသားတို့ကြည့်ရွုလေ့လာအပ်တဲ့နေရာတွေကို ရွုစားရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ… တွေးနေ ငန်းနေလိုက်တာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတော့မသိဘူး…ကျောင်းကားလာလို့သူတို့တက်ပြီးမှ ကျတော်ကျောင်းကားစောင့်နေပါလားဆိုတာသတိရလို့ ကမန်းကတန်းပြေးတက်လိုက်ရသေးတယ်…ကံဆိုးတာလား ကံကောင်းတာပဲလားတော့မသိဘူး… ကျောင်းကားပေါ်မှာ ထိုင်စရာဆိုလို့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဘေးထိုင်ခုံပဲ ရှိတယ်ဝင်ထိုင်ပြန်ရင်လည်း မကောင်း … မထိုင်ပြန်ရင်လည်း ညောင်းမှာ … မထူးပါဘူးဗျာ ဝင်ထိုင်တာပဲကောင်းပါတယ် အားပါးပါး…ကိုယ်သင်းနံ့လား ရေမွေးလားတော့မသိဘူး … လူကိုမိုက်ခနဲနေအောင်ကို မွေးတယ်ဗျာ… သူ့ဘက်ကိုတော့လည့်မကြည့်ရဲသေးဘူး…သတ္တိကအဲသလိုကောင်းတာ … ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းကြာလာတော့ မနေနိုင်တော့ဘူး … ဘေးကသန်လျင်တံတားကိုပဲကြည့်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ခိုးကြည့်လိုက်တော့ သူကလည်းတံတားအောက်ကရေပြင်ကိုတခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ပုံနဲ့ ကြည့်နေတယ်ဗျ… ဘေးတစောင်းလေးလှည့်နေတဲ့မျက်နှာလေးက တော်တော်လှတယ်ဗျာ … ပါးပြင်ဖြူဖြူလေးနဲ့ ဆံပင်နက်နက်လေး ကြားထဲကနားရွက်လေးဆို မြင်လိုက်တာနဲ့ကို ရင်ထဲမှာ ခါကနဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာ … မြင်မြင်ချင်းကြွေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာလားမသိဘူး… ပိုးစိုးပက်စက်ကိုကြွေသွားတာ … တံတားလည်းဆုံးရောသူကဖျက်ကနဲဒီဘက်လည့်လာလို့ အကြည့်ချင်းတစ်ချက်ဆုံသွားသေးတယ်…ကျတော်နည်းနည်းတော့ရှက်သွားတယ် .. ငန်းတာလူမိသွားလို့လေ… ဒါတောင်သန်လျင်တံတားကရှည်တော့ အကြာကြီးငန်းလိုက်ရသေးတယ်… ကျောင်းရောက်ပြီး ရုံးခန်းနားမှာကိုယ့်အခန်းဘယ်မှာရှိမှန်း သွားကြည့်တော့ ကားပေါ်ကကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်သေးတယ်…သူလဲ fresher ပဲဗျ… အခန်းတူပါစေဗျာ … စာတော်မဲ့ရုပ်လေးပါ … civilတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ စိတ်ကူးတောင်ယU်လိုက်သေးတယ် … ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုမဖြစ်လာဘူးဗျာ… IT ကတဲ့ … နောက်မှသိတာပါ… civil မှာလဲဘယ်က ဘယ်လို မချောမလှတွေလာစုနေမှန်းကိုမသိပါဘူးဗျာ … ပိန်းလိုက်တာ နောက်ပိုင်း fresherwelcome လုပ်တော့ ရွေးတဲ့ queen တောင် သိပ်မလန်းဘူး … ဒါတောင်လာကြောင်နေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဗျာ … ။
အန့်ရော… ကျတော်ကတော့ အားရင် ITဘက်ပဲသွားတယ် … ကျောင်းရောက်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ ဘော်ဘော်တွေဘာတွေလည်းရှိပြီလေ…အတူတူသွား ညှောင်ကြတာပေါ့ … IT ကစော်တွေက အလန်းတွေကြီးပဲလေ … ကျတော်ကတော့ကျတော့နားရွက်လေးကိုပဲ သွားကြည့်တာပါ… နာမည်တော့ သိရပြီဗျ … နန်းမေ …တဲ့ …ရှမ်းလူမျိုးထင်တယ် … လူချင်းတော့ မသိသေးဘူး … သတ္တိကလည်း ခတ်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ … ကျတော်ဒီလိုဖြစ်နေတာကို ကံကြမ္မာက မနေနိုင်ဘူးထင်တယ် …သူနဲ့ရင်းနီးဖို့အခွင့်အရေးရလာပါလေရော… တစ်ရက်ကျတော်ကျောင်းကားမမှီဘူ်း…မနေ့ညက chအmpion leအgue နှိပ်စက်တာလေ … ကျောင်းမတက်တော့ပဲရန်ကင်းဘက်သွားမယ်ဆိုပြီး တာမွေဘက်ကိုအလာ … တာမွေကကားမှတ်တိုင်မှာ ကျတော့်ရဲ့နန်းမေ ကိုသွားတွေ့တယ်… ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ပဲဗျ … ကြည့်ရတာသူလဲကျောင်းကားမမှီလို့ထင်တယ် … ဘယ်ရမလဲ .. ကျတော်လည်းကျောင်းတက်မှာပေါ့ဗျ … ဒါမျိုး ဆိုတာ ရခဲတယ်လေ…အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သန်လျင်-ကျောက်တန်းကား ရောက်လာတော့ သူအရင်ဆုံးတက်သွားတယ် …ကျတော်ကားပေါ်ရောက်တော့ သူက ထိုင်တောင်ပြီးနေပြီ … သွက်တယ်နော်… ကျတော်ကတော့မတ်တက်ပဲပေါ့ … ကားထွက်တော့မှ သူကျတော့ကိုတွေ့ပြီးတစ်ချက်ပြုံးပြတယ် …ဒီမောင်မင်းကြီးသားကတော့ ဝမ်းသာလုံးတွေစို့လို့ပေါ့ … ပြောရUီးမယ်… ကံများကောင်းချင်ရင်ဆက်တိုက်နော် … ကျောင်းနားရောက်ခါနီးလဲကျရောသူတော်ကောင်းကားက ဘီးထပေါက်ရော … နန်းမေ ကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ပုံစံနဲ့ ကားပေါ်ကဆင်းဖို့မယ်လုပ်တာပေါ့… ကျောင်းနောက်ကျတော့မှာကိုး … သူဆင်းတော့ကျတော်လည်းဆင်းတာပေါ့ … အောက်လည်းရောက်ရောနန်းမေ က ကျတော်ကိုစကားစပြောတယ် …(အမှန်ဆို ကျတော်က စရမှာပါ …သတ္တိကကောင်းတယ်ဆိုတော့) “ဟဲ့ …နင်လည်းလမ်းလျောက်မှာလား” တဲ့… ရုတ်တရက်ဆိုတော့ကြောင်သွားတယ် … ပြီးမှကမန်းကတန်း… “အေး …ကျောင်းနောက်ကျတော့မယ်လေ” လို့ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ဖြေလိုက်ရသေးတယ် ဒီလိုနဲ့ အတူတူသွားတော့ ကျတော်ကမသိသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ရောတာပေါ့… “နင်က ဘယ်မေဂျာကလဲ ”IT က .. နင်ရော” “ငါက civil က” “ဆရာကြီးပဲ…” “မဟုတ်ပါဘူးဟာ …လိုက်ထားတာ“ “သြော်…” ဒီလိုနဲ့စကားစပြတ်သွားသေးတယ်…ပြီးမှသူက “ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့ကငါ့ဘေးမှာလာထိုင်တာနင်မှတ်လား” “အေး…နင်မှတ်မိသားပဲ” “မှတ်မိတာပေါ့နင့်ရုပ်ကမှတ်မိလွယ်တာကိုး” “ဘာလို့လဲ” “အဲလောက်ပိန်ပြီးအရပ်အရမ်းရှည်နေတဲ့ကြားထဲ မျက်မှန်ကတပ်လိုက်သေးတယ်လေ” တဲ့ ကောင်းရော…. အဲလိုနဲ့ကျတော်တို့နစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဗျာ… Cအnteen အတူထိုင်ဖြစ်ဟိုဟိုဒီဒီအတူသွားဖြစ်ပေါ့ … အထင်တွေကြီးနေUီးမယ်… နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ…သူဘော်ဘော်တွေ ကျတော့ဘော်ဘော်တွေလည်းပါပါတယ်… ကျတော်သူ့ကိုကြွေနေတာသူလဲသိပါတယ်…တစ်ခါတလေကျတော်က ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ငန်းမိတာကိုး… ကျတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကသတ္တိကလည်းခတ်နည်းနည်းဆိုတော့ မပြောဖြစ်သေးပါဘူး… ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်ကျတော့သူနဲ့တွဲနေတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံးကျောင်းမလာဘူး…။
ကျတော့်ဘော်တာကလည်းအလိုက်တသိ ရှောင်ပေးပါတယ် … canteen ကထိုင်နေကြဆိုင်လေးမှာ နှစ်ယောက်တည်းပထမဆုံးထိုင်ဘူးတော့ သူတော့မပြောတက်ဘူး… ကျတော်တော့ ရင်တွေခုန်လိုက်တာဗျာ… ဆိုင်ကလည်းဒီနေ့မှလူတအားရှင်းနေတယ်…ရာသီUတုကတော့ကျတော့ဘက်ကချည်းပဲ… ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကြာတဲ့အထိသူရောကျတော်ရောစကားမပြောဖြစ်ကြဘူး… ခါတိုင်းပြောနေကြ စကားလုံးတွေတောင် ဒီနေ့မှဘာလို့ပါးစပ်ကထွက်မလာလဲမသိပါဘူးဗျာ… နောက်တော့သူကပဲစပြီး “ဒီနေ့ဟိုကောင်နှစ်ကောင်မလာတော့ clအss တက်ရမှာ စိတ်တောင်မပါဘူး“ “မတက်ချင်ရင်မတက်နဲ့လေ” “မတက်တော့ရောဘာလုပ်စရာရှိလို့လဲ” “ငါနဲ့ စကားထိုင်ပြောပေါ့” “အမလေး နင်ကအခုတောင်စကားမပြောပဲ coffee ခွက်ကိုထိုင်ကြည့်နေလို့ ငါ့မှာပျင်းနေတာ” “ငါကစU်းစားနေတာ“ “ဘာတွေများသည်းကြီးမည်းကြီးစU်းစားနေရတာတုန်း“ “နင် ဒီနေ့ clအssမတက်ဘူးမဟုတ်လား” “ငါမေးတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ“ “ပြောပါဟာ နင် classလစ်မယ်မှတ်လား” “အေး လစ်မယ်ဟာ“ “ငါကနင့်ကိုပြောဖို့စကားတွေစီနေတာ” “အန်မယ်… စကားပဲဒီအတိုင်းပြောလဲရတာပဲကို” “ငါကလေးလေးနက်နက်ပြောမလို့ဟ…” ကျတော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူနည်းနည်းရိပ်မိသွားပြီးမျက်နှာလေးရဲကနဲဖြစ်သွားတယ် ကျတော်ကဆက်ပြီးတော့ “ငါ ပြောချင်နေတာကြာပြီ… ၂ ယောက်တည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဖြစ်လိုလို့ပြောလိုက်တော့သူခေါင်းလေးငုံ့ထားတယ်လေ “နန်း … နင်ငါ့ကိုခဏမော့ကြည့်ပါUီး” သူမော့အကြည့်မျက်လုံးချင်းအဆုံမှာ ခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူ့လက်ကလေးကိုကိုင်ပြီး “နန်းရယ်ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်တာပဲ” လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တော့ “…..” သူကျတော့်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်…ပြီးမှ “နင်မညာပါဘူး” “ဘာ … ဘယ်လို“ “နင့်မျက်လုံးတွေကိုငါဖတ်ကြည့်သလောက် နင်မညာပါဘူး” “ငါ နင့်ကိုတကယ်ချစ်တာပါနန်းရယ်… နင်နဲ့ငါ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ ကျောင်းကားပေါ်မှာကတည်းကနင့်ကိုအရမ်းချစ်သွားတာပါ” ဒီအချိန်ထိကျတော်ကိုင်ထားတဲ့သူ့လက်ကို မရုန်းသေးပါဘူး… “နင်ငါ့အပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ဟင်“ “ငါအခုပြောရမှာလား” “နင့်သဘောပါ…အခုပြောတော့ပိုကောင်းတာပေါ့” “အခုပြောလိုက်ရင်…ငါအရမ်းလွယ်တယ်လို့နင်ထင်သွားမှာပေါ့” အဲလိုနဲ့ ကျတော်တို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတော့တယ်… နန်းက ကျွန်တော့ကိုအရမ်းချစ်တာပဲဗျ… ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ ကျတော့ကို တအားဂရုစိုက်လာတယ်… ထမင်းချိုင့်ဆိုနှစ်ယောက်စာအမြဲထည့်လာတယ် … ကျတော်နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ လူတွေကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး …လူတွေတအားများတဲ့ဆိုင်ထဲမှာ ကျတော့်ကို ခွံ့ကြွေးချင်ကြွေးတာပဲဗျ…ကျတော်ကတောင်နည်းနည်းမျက်နှာပူသေးတယ် ကျတော်တို့နှစ်ယောက်ကရည်းစားဖြစ်တာသာ ၂ ပတ်ရှိတော့မယ် .. အခုထိ အပြင်မှာချိန်းပြီး မတွေ့ရသေးဘူး…တရက်ကျတော့ ကျောင်းလစ်ပြီး ကန်တော်ကြီးထဲကိုသွားကြတယ်… နန်း လက်ကလေးတွေကိုကိုင်ပြီး ကန်ရေပြင်ကိုကြည့်ရတဲ့ အရသာဟာ ဘာနဲ့မှကိုမလဲနိုင်ပါဘူးဗျာ…။
ထိုင်နေရင်းနဲ့ နန်းရဲ့ပခုံးလေးပေါ်ကိုလက်ကလေးတင်လိုက်တော့ နန်း ရဲ့ခေါင်းလေးကကျတော့ပခုံးပေါ်ရောက်လာတယ်… အမျိုးသမီးဆိုလို့ တစ်ယောက်နဲ့မှအခုလိုမနေဘူးတော့ကျတော့ အတွက် အထိတွေ့တိုင်းဟာ အရမ်းနူးညံ့နေတယ်… ရင်တွေခုန်လိုက်တာဗျာ… ပြီးတော့ နန်းရဲ့ဆံပင်လေးတွေဆီကထူးဆန်းတဲ့ အနံ့တစ်မျိုးရတယ်… ကျတော်မနေနိုင်တော့ဘူး… “နန်း…နန်းဆံပင်လေးတွေကို ကိုအရမ်းနမ်းချင်တာပဲ” လို့ပြောလိုက်တော့ “ကိုရယ်…”ဆိုပြီးခေါင်းလေးငုံ့ပေးတဲ့နန်းကိုကျတော်ချစ်လိုက်တာဗျာ ဆံပင်လေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့တွေကြားမှာကျတော့နွုတ်ခမ်းတွေမရုန်းနိုင်တော့ဘူး… တော်တော်လေးကြာတော့နန်းက “ကို…..ဘာလို့အဲလောက်အကြာကြီးနန်းဆံပင်တွေကိုနမ်းနေတာလဲ” “ထူးဆန်းတဲ့အနံ့လေးတစ်ခုရလို့နမ်းရဲ့” “တကယ်…” “ဟုတ်တယ်…အဲ့ဒီ့အနံ့လေးကို ကိုတစ်အားဆွဲသွားပြီ” “ဒါဆိုနန်းဆံပင်တွေကိုအမြဲနမ်းတော့မှာပေါ့“ “ဘာလဲ…နန်းကမကြိုက်လို့လား“ “မဟုတ်ပါဘူး…နန်းနေ့တိုင်းခေါ်င်းလျှော်လာရအောင်မေးတာပါ“ “နေ့တိုင်းတော့မလျှော်ပါနဲ့နန်းရယ်… ကို့ချစ်သူလေးဖျားနေပါUီးမယ်” “ကိုက နန်းကိုဂရုစိုက်သားပဲ “သြော်နန်းရယ်…ကိုနန်းကိုအဲ့လောက်ချစ်တဲ့ဟာ” ပြောရင်းနဲ့ကျတော်သူ့ကိုတင်းတင်းလေးဖက်လိုက်မိတော့…ကျတော့ရဲ့ညာဘက်လက်ကအရမ်းကိုနူး ညံ့တဲ့ အထိအတွေ့တစ်ခုကိုသွားထိမိတယ်… ကျတော်ဘဝမှာ အဲ့လောက်နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့မျိုး တခါမှမခံစားရဘူး… နန်းလည်းသတိထားမိသွားပြီး လူချင်းခွာလိုက်တယ်… “နန်း…“ “….” “ကိုတို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်…” “ဘာကားမို့လို့လဲ” “မသိဘူး…” “ဟင်…မသိပဲနဲ့များ…” “နောက်တာပါနန်းရဲ့…နေပြည်တော်မှာ Nicolas Cage ကားသစ်တင်နေတယ်” “ဟုတ်လား … နန်းလည်းNicolas Cage ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်” “ကိုထက်ပိုကြိုက်တာလား” “အာ…ကိုကလဲ…ကို့ထက်ပိုကြိုက်စရာလား” “နောက်တာပါ…အခုသွားမယ်လေ .. ဒါမှနေ့လည်ပွဲ မှီမှာ” အဲလိုနဲ့ နေပြည်တော်ရုံလည်းရောက်ရောကျတော်က ၂ယောက်တွဲခုံဝယ်လိုက်တော့်… နန်းက ဘာမှတော့မပြောပါဘူး…တချက်တော့ကြည့်လိုက်တယ်… ဒါနဲ့ပဲမုန့်တွေဘာတွေဝယ်ပြီး အထဲရောက်တော့ ရုံထဲမှာလူတော်တော်ရှင်းတယ်ဗျ… ၂ယောက်တွဲ ခုံတွေမှာဆိုလူကိုသိပ်မရှိဘူး… အဲလိုနဲ့ရုပ်ရှင်စတော့နန်းက ကျတော့ပခုံးကိုမှီပြီးကြည့်နေတယ်…ကျတော့အတွက်ဒုက္ခကစရောက်တာပဲ… နန်းရဲ့အနံ့လေးတွေက ကျတော့ကိုနှိပ်စက်နေပြီလေ… “နန်း … ” ခေါင်းလေးမော့လာပြီး… “ပြောလေကို” တော်တော်ကြာစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပြီးမ “ကိုလေနန်းရဲ့နားရွက်ကလေးကို ဟိုးတစ်ခါကျောင်းကားပေါ်မှာစတွေ့ကတည်းက တအားနမ်းချင်နေတာ….အခုကို နမ်းပါရစေနော်” သူနည်းနည်းတွေဝေသွားတယ်… ခဏကြာတော့မှ… နားရွက်ပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို သပ်တင်ပေးတယ်…ပြောမဲ့သာပြောတာ ကျတော်ကတစ်ခါမ နမ်းဘူးတာမဟုတ်ဘူး…။
ဒါပေမဲ့ နန်းရဲ့ နားရွက်လေးတွေက ပိတ်ကားပေါ်ကလာတဲ့ အလင်းရောင်ပေါ်မှာအရမ်းကိုလှနေတော့ ကျတော့ရဲ့နွုတ်ခမ်းလေးနဲ့ နားရွက်အောက်ခြေလေးကို ဖိနမ်းလိုက်မိတယ်…အရမ်းဆန်းသစ်တဲ့ အထိအတွေ့တွေကြားမှာ သူရောကျတော်ရော နစ်မျောသွားတယ်…နန်းရဲ့အသက်ရွူသံပြင်းပြင်းလေးကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့စိတ်တွေဘ ယ်လိုမှထိန်းလို့ မရတော့ဘူး… နန်းမျက်နှာလေးကိုဆွဲလှည့်လိုက်ပြီးကျတော်အင်မတန်ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ နန်းရဲ့ နွုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက်မိတယ်… မထင်မှတ်ထားတဲ့နန်းဆီက လိုက်ရောတဲ့တုန့်ပြန်မွုတွေက ကျတော့ကိုပိုပြီး ရဲတင်းသွားစေတော့တာပဲ…နန်းရဲ့နုတ်ခမ်းနှစ်လွာဟာ ဒီလောက်ချိုမှန်းလည်း ကျတော်အခုမှပဲသိတယ်ဗျာ… ကျတော့ရဲ့ လက်တွေကလည်းနန်းရဲ့ကျောပြင်လေးကို ညင်ညင်သာသာလေးပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်… ကျတော်သိလာတာက နန်းရဲ့အသက်ရွူသံတွေပိုပိုမြန်လာသလိုပဲ… ကျတော့်ရဲ့လျှာလေးကို နန်းရဲ့ နွုတ်ခမ်းနစ်လွာကြားထဲ သွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့နန်းဆီက အသံလေးတစ်သံ တိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်… ကျတော့လက်တွေအငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူး… ကျတော့လက်တစ်ဖက်ကိုနန်းရဲ့ ညာဘက်နို့အုံလေးပေါ်မှာတင်လိုက်တော့ နန်းဆီကတုန့်ပြန်တဲ့ အနမ်းတွေ ခဏရပ်သွားပြီးကျတော့လက်ကိုလာကိုင်တယ်…ကျတော်ကခပ်ပြင်းပြင်းလေးလည်းနမ်းလိုက်ရော နမ်းရဲ့လက်တွေကွာကျသွားပြီး ကျတော့ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားပါလေရော…………. ဒါနဲ့ပဲ ကျတော်လဲနန်းရဲ့နို့အုံလေးကို ခပ်ဖြေးဖြေးပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ နန်းက “ကိုရယ်…”လို့တိုးတိုးလေး ညီးလာတယ်…ကျတော်ရဲ့အပွတ်အသပ်တွေတအားကြမ်းပစ်လိုက်တယ်…ကျတော်အားမရတော့ဘူး …ဘောင်းဘီထဲမှာလဲတအားကိုတင်းနေပြီ…လက်တွေကို နန်းရဲ့ T-shirt အောက်ထဲကနေလျိုပြီးသွင်းလိုက်တော့ ဘရာလေးကိုသွားစမ်းမိတယ်…ကျတော့လက်တွေကရပ်မနေပဲ ဘရာလေးကိုအပေါ်ပင့်တင်လိုက်ပြီး နို့လေးကိုပွပ်ပေးလိုက်တော့နန်းက အရမ်းကိုပြင်းထန်တဲ့ အနမ်းတွေနဲ့တုန့်ပြန်လာတယ်… ကျတော်ရမက်တွေအရမ်းထန်လာပြီးဒီနေရာဟာရုပ်ရှင်ရုံဆိုတာကျတော်မေ့သွားတယ်… ကျတော့်ရဲလက်တွေက နန်းရဲနို့တွေပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲ နန်းတစ်ကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ပေးနေမိတော့တာပါပဲ… ခဏကြာတော့ကျတော့နွုတ်ခမ်းတွေကို နန်းရဲ့နွုတ်ခမ်းတွေဆီကခွာပြီး နို့တွေပေါ်ပို့လိုက်တော့နန်းက သူလက်တွေနဲ့တွန်းဖယ်တားတယ်လေ…ဒါပေမဲ့ ရမက်တအားကြီးနေတဲ့ ကျတော့ကိုနန်းရဲ့လက်တွေက မတားဆီးနိုင်ပါဘူး… နန်းရဲ့နို့တွေကို ကလေးတစ်ယောက်လို အငမ်းမရစို့ပေးလိုက်တော့ နန်းရဲ့လက်တွေက ကျတော့ဆံပင်တွေကို အကြောင်းမရှိပဲထိုးဖွနေတော့တာပါပဲ…အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားလဲတော့မသိဘူး…ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ မှပဲ ကျတော်တို့နစ်ယောက်ရပ်ဖြစ်တော့တယ်… နန်းရဲ့ ဘရာလေးကိုပြန်ဝတ်ပေးလိုက်တော့ နန်းတအားရှက်သွားတယ်…မျက်နှာလေးကိုရဲနေတာပဲ… ကျတော့ကိုလဲ ဆိတ်ဆွဲတယ် “နာတယ်… နန်းရ..” “နာပေ့စေ…နာအောင်လုပ်တာ” “ကိုကတော့သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရတယ်” “ကိုနော်” “မကောင်းလို့လား” “မကောင်းပါဘူး” “ညာတယ်…ဒါဆိုဘာလို့အသက်ရွူသံတွေမြန်လာတာလဲ” “ကိုကနန်းပါးစပ်ကိုပိတ်ထားတော့ နန်းကအသက်ရွူကျပ်ပြီးမောလာတာပေါ့…ဒါကြောင့်မြန်လာတာပါ” “ဒါဆိုဘာလို့ နန်း ပင်တီစိုနေတာလဲ” ။
“ကိုဘယ်လိုသိ……အဲ………ကိုကွာ..မကောင်းဘူး” ဆိုပြီးတအားကိုရှက်နေပါရော… “ကိုကမှန်းပြီးပြောလိုက်တာ…ကိုထင်တာမှန်နေပြီပေါ့” “ကိုကွာ…မပြောနဲ့…နန်းရှက်တယ်” “နန်းကလဲ” “ဘာနန်းကလဲလဲ…ကိုနော်..တော်တော်ဆိုးတယ်…” “မကောင်းလို့လား” “ဟာကွာ…………………………” ဒီနေ့မှာကျတော့ချစ်သူလေး အရမ်းကိုရှက်နေတော့တာပါပဲ…. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာ ဟာပြီးတစ်ခုခုလိုနေသလို ခံစားရတယ်ဗျာ… ဒါနဲ့နန်းဆီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့ နန်းကအိပ်ချင်မူးတူးအသံနဲ့ hello လုပ်ပါတယ်… အဲ့တော့မှည ၂ နာရီကျော်မှန်းသိတယ်ဗျာ… “ကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ညကြီးဖုန်းထဆက်တာလဲ” “ကို လုံးဝအိပ်လို့မရဘူးနန်းရယ်” “ဘာလို့လဲ” “နေ့လယ်ကနန်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေပြန်တွေးပြီး ရင်တွေခုန်လာလို့… နန်းရော မဖြစ်ဘူးလား” “အိပ်ခါနီးတုန်းကတော့ဖြစ်တယ်” “ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ” “အာ….ကိုကလဲ” “နန်းကလဲချစ်သူအချင်းချင်းတောင် မပွင့်လင်းချင်လို့လား” “……” “ဒါဆိုလဲကိုမမေးတော့ပါဘူး” “မဟုတ်ပါဘူးကိုရယ်…နန်းရှက်နေလို့ပါ… နန်းကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်” “ကိုနန်းကိုဘယ်တုန်းကစိတ်ဆိုးဘူးလို့လဲ….” “အင်း….နန်းပြောရမှာရှက်နေတယ်…” “မရှက်ပါနဲ့နန်းရယ်…နော်” “ဟို… နန်းလေ… တစ်ခုခုကို တမ်းတနေသလိုပဲ… ကို့ကိုလဲ အရမ်းတွေ့ချင်တယ်” “နန်းတကယ်ပြောတာလား…ဒါဆိုကိုအခု နန်းဆီကိုလာခဲ့မယ်..” “အာ… ကိုကလဲမိုးအရမ်းချုပ်နေပြီ… မလာပါနဲ့ကိုရယ်…” “မရဘူးနန်းရာ… ကိုအခုလာပြီ…” “ကို….ဖေဖေ ရော မေမေ ရောအိမ်မှာရှိတယ်… ကိုလာရင်တောင်ဘယ်လိုတွေ့မလဲ…” “နန်းကို့ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ရအောင်လုပ်ပေါ့… အာ… ပြောနေတာကြာတယ် အခုလာပြီ” ကျွန်တော်လဲဖုန်းချပြီးတာနဲ့ စက်ဘီးကောက်စီးပြီးနန်းဆီထွက်ခဲ့တော့တာပဲ… နည်းနည်းတော့ ဝေးတယ်…လမ်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်မှတောင်မရှိတော့ဘူး… ခွေးတွေပဲရှိတယ် … ဟောင်လိုက်ကြတာပိုစိုးပက်စက်… ကြောက်ကြောက်နဲ့ အသေနင်းတာ နန်းအိမ်ရှေ့ကိုဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူး… ကျွန်တော့ချစ်သူလေးက လိမ္မာတယ်ဗျ… ဝရန်တာမှာကျတော့ကို ထွက်စောင့်နေတယ်… ကျွန်တော်က ဆင်းခဲ့ဖို့ပြောတော့ နန်းကရွူးတိုးတိုးဆိုပြီးလုပ်ပြပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်… ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ခြံကျော်ဝင်ပြီးစောင့်နေလိုက်တာ ခဏကြာတော့ အိမ်ရှေ့တံခါးပွင့်လာပြီး နန်းထွက်လာပါရော…ညဝတ်အင်းကျီပါးပါးလေးနဲ့ ဘာမှ မလိမ်းမခြယ်ထားနဲ့ နန်းဟာခြံမီးရောင်မှိန်မှိန်လေးအောက်မှာ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်ဗျာ… နန်းရဲ့မို့မောက်နေတဲ့ နေရာလေးတွေကို ကြည့်မိလိုက်တော့ ကျွန်တော် အသက်ရွူတောင်မှားသွားတယ်ဗျာ… “ကိုနော် … တအားဆိုးတယ်…ခြံထဲတောင်ရောက်နေပြီ…” “နန်းတို့ခြံကနိမ့်နိမ့်လေးကိုး” “သူခိုးလို့အထင်ခံရမှဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်…” “……” “ကို……” “………” “နန်းကိုဘာလို့အဲလောက့်ကြည့်နေတာလဲ… နန်းမနေတက်တော့ဘူး” “နန်းရယ် အရမ်းလှတာပဲ”ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နန်းကို ဆွဲဖက်ပလိုက်တော့ နန်းက အို တဲ့… အခြေအနေပေးတာပဲလားတော့မသိဘူး…လမ်းပေါ်မှာလဲ အသွားအလာလုံးဝမရှိဘူး… ကျွန်တော်တို့ ထိုင်နေတဲ့နေရာကလဲအပင်တွေကွယ်နေတော့ တော်ရုံနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ… “နန်း…”လို့ခေါ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကို မော့ကြည့်လာတဲ့ နန်းရဲ့ နွုတ်ခမ်းတွေကိုအငမ်းမရနမ်းပစ်လိုက်တော့ နန်းကလဲ ကျွန်တော်နမ်းလာမှာကို စောင့်နေတယ်နဲ့တူတယ်… ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲပြန်နမ်းလာတယ်… ကျွန်တော်လဲ နေ့လယ်က အထိအတွေ့တွေကို ပြန်သတိရသွားပြီး လက်တွေကနန်းရဲ့ ညဝတ် အင်းကျီအောက်ကိုတိုးဝင်တော့တာပါပဲ… နန်းက တစ်ချက်တော့တွန့်သွားသေးတယ်…ဒါပေမဲ့ အင်မတန်မြန်တဲ့ ကျွန်တော့လက်တွေကြားမှာ နန်းရဲ့ ဘရာလေးလဲ နေလိုမရတော့ပါဘူး…။
လက်တွေက နန်းရဲ့နို့လေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ နန်းရဲ့ အသက်ရွူသံတွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူး… တစ်ချက်တစ်ချက် နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုလက်မနဲ့ ပွတ်ချေပေးလိုက်တော့နန်းရဲ့ ရင်ဘက်တွေ ကော့တက်လာပါတယ်… ခဏကြာတော့ နမ်းနေတာကို ခဏရပ်လိုက်ပြီး… “နန်း… မြက်ခင်းပေါ်မှာလှဲအိပ်လိုက်ပါလား”လို့ပြောလိုက်တော့ နန်းကကျွန်တော့ကို ရီဝေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ပြီး … “ဘာလုပ်မလို့လဲကိုရယ်…” တဲ့… “ကိုပြောသလိုလုပ်ပါ…” နန်းလည်း ကျွန်တော့ကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့ပါဘူး…မြက်ခင်းသန့်သန့်လေးက ကျွန်တော်တို့အတွက် သီးသန့်လုပ်ထားလိုပါပဲ… ဒီလိုနဲ့ ပက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့နန်းရဲ့လည်ပင်း လေးကိုနမ်းလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကလည်း နန်းရဲ့ နို့လေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့နန်းဆီက ညီးသံသဲ့သဲ့လေးထွက်လာပါတော့တယ် … ကျွန်တော့ရဲ့အနမ်းတွေကနန်းရဲ့ ရင်ညွန့်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ နန်းကတုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ကျွန်တော့ကိုဖက်ထားပြီး “ကိုရယ်” လို့တိုးတိုးလေးပြောလာတယ်… ကျွန်တော့လက်တွေကိုနန်းရဲ့နို့တွေပေါ်ကဖယ်လိုက်ပြီး နန်းရဲ့ညဝတ်အင်းကျီကြယ်သီးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းဖြုတ်နေလိုက်တယ်… နန်းကတော့မငြင်းဆန်ပဲ မျက်စိတွေကိုဆုံမှိတ်ထားလေရဲ့… ကြယ်သီးတွေအားလုံးပြုတ်သွားပြီး အင်းကျီလေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဟလိုက်တော့ နန်းရဲ့ ဖြူဝင်းတဲ့နို့လေးတွေပေါ်လာတာပေါ့ … လှလိုက်တာဗျာ… အခုမှသေသေချာချာ မြင်ရတယ် … ဖြူဝင်းတဲ့ နို့အုံလေးဟာ သိပ်လည်းမသေးလွန်း သိပ်လည်းမကြီးလွန်းပါဘူး… နို့သီးခေါင်းနီနီလေးတွေကလည်း ကျွန်တော့ကို မှင်သက်သွားစေတယ်…ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်အာခေါင်တွေအရမ်းခြောက်လာတယ်ဗျာ… တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ပဲ နန်းရဲ့ညာဘက်နို့သီးခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့နွုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ငုံလိုက်မိတယ်…ကျွန်တော့လက်တွေကလည်း ငြိမ်မနေပါဘူး … လက်တစ်ဖက်က နန်းရဲ့ဘယ်ဘက်နို့လေးကိုကိုင်ထားပြီး ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေသလို … လက်တစ်ဖက်က နန်းရဲ့ဗိုက်သားလေးတွေကို ပွတ်သပ်ကစားနေလိုက်တယ် … နန်းကတော့တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်နေတာပဲ… တစ်ချက်တစ်ချက် နို့သီးခေါင်းလေးတွေ မနာအောင်ဖွဖွလေး ကိုက်ပေးလိုက်ရင် နန်း ကော့ကော့တက်လာတာသတိထားမိတယ် … ဒီလိုနဲ့ညာလက်နို့ကိုစို့လိုက် ဘယ်ဘက်နို့ကို ငုံလိုက်လုပ်နေရာကနေ ကျွန်တော့ရဲ့နွုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းရဲ့ဗိုက်သား ဝင်းဝင်းလေးဆီပြောင်းလိုက်တယ်… လက်တွေကတော့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုပွတ်ချေနေတာပေါ့ … နန်းရဲ့ ချက်ကလေးထဲကိုကျွန်တော့လျှာလေးနဲ့မွေ့လိုက်တော့ နန်းရဲ့ တင်ပါးတွေကော့တက်လာတယ်…ကျွန်တော်အရမ်းမောနေပြီ… ဒီအထိ စက်ဘီးအသားကုန်နင်းရတာတောင် ဒီလောက်မမောဘူး …နန်းလဲတော်တော်မောနေပါပြီ… ချွေးတွေကို စို့လို့ …ခဏကြာတော့ ကျွန်တော်လည်း ရှေ့ဆက်တိုးချင်လာတယ်…ဒါနဲ့ပဲ လက်တစ်ဖက်ကိုနန်းရဲ့ဆီးခုံလေးဆီ အရဲစွန့်ပြီးတင်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော့ကိုဖက်ထားတဲ့ နန်းရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့လက်လေးကို အတင်းတွန်းဖယ်ပြီး … ။
“တော်ပြီကိုရယ်….” လို့မောသံလေးနဲ့ပြောလာတယ်… ရမက်အရမ်းထန်နေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့အားကို နန်းရဲ့လက်နုနုလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ် တွန်းလှန်လို့ရမှာလဲ… ကျွန်တော့လက်တွေက ဖယ်မသွားပဲ နန်းရဲ့ဆီးခုံလေးကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်… နန်းတစ်ယောက်တော့ အရမ်းကိုမောနေပါပြီ…နန်း ရဲ့လက်ကလေးတွေ လဲအားပါပါနဲ့မတွန်းလှန်နိုင်တော့ပါဘူး… ဒါကိုကျွန်တော်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီး နန်းရဲ့ညဝတ်ဘောင်းဘီနဲ့ ပင်တီကြားထဲကိုကျွန်တော့လက်တွေသွင်းပစ်လိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ နန်းဟာလေးဆီတော့သွားလို့မရသေးပါဘူး…နန်းက သူ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို တအားစိထားတယ်လေ… ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် အားမလျှော့ပါဘူး…ဆီးခုံလေးကိုပဲသေသေချာချာ ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်… ခဏကြာတော့ကျွန်တော့နွုတ်ခမ်းတွေကို နန်းရဲ့ နို့လေးတွေဆီပြန်ပို့ရင်း ခက်ကြမ်းကြမ်းစို့ပစ်လိုက်တော့နန်းလည်းမနေနိုင်တော့ပါဘူး… တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စိထားတဲ့ပေါင်လေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းခြင်းဖြေလျော့လာတယ်… ဒါနဲ့ကျွန်တော့လက်ကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေးနန်းရဲ့ဟာလေးဆီကိုပိုလိုက်တော့ … အို … နန်းရဲ့ပင်တီလေးက တအားကိုစိုနေတာပဲ …ကျွန်တော်လဲအချိန်မဆွဲတော့ပဲ နန်းရဲ့ အစိလေးရှိမဲ့နေရာကို မှန်းပြီးတော့လက်ခလယ်လေးနဲ့ ဖိပွတ်ပေးလိုက်တော့… “အ…အ… ကို…..အ…”နန်းဆီကအသံတိုးတိုးလေးထွက်လာပြီး နန်းတစ်ကိုယ်လုံးတုန်ယင်နေတော့တာပဲ… ပြီးတော့ကျွန်တော့လက်ကိုကိုင်ထားတဲ့ နန်းရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့ခေါင်းလေးကိုလာကိုင်ပြီးဆွဲမော့ပစ်လိုက်တယ်… ကျွန်တော်ကြောင်နေတုန်းမှာပဲ နန်းရဲ့ ချိုမိန်လွန်းလှတဲ့နွုတ်ခမ်းတွေက ကျွန်တော့ နွုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရနမ်းနေတော့တာပါပဲ… ကျွန်တော်အရမ်းကိုကြည်နူးသွားတယ်ဗျာ… နန်း ရဲအနမ်းတွေကို ဒီလိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားဘူး…….. ကျွန်တော့လက်တွေကနန်းရဲ့ အစိလေးနေရာကိုမှန်းပြီးပွတ်လိုက် အကွဲကြောင်းလေးကိုမှန်းပြီးပွတ်လိုက်နဲ့အလုပ်များနေလိုက်တာ နန်းရဲပင်တီလေးတောင် တော်တော်လေးကို စိုစွတ်နေပါပြီ…ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လောကကြီးကိုမေ့နေတုန်း … ဗြုန်းဆို … နန်းအဖေအခန်းရဲ့မီး ရုတ်တရက်ပွင့်လာတော့တာပါပဲ… ရုတ်တရက်ဆိုတော့ နန်းကအရမ်းလန့်သွားပြီး … ကျွန်တော့်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်တာ ကျွန်တော်နဲ့ နန်းနဲ့လူချင်းကွာသွားကြတယ်… ပြီးတော့ နန်းကကျွန်တော့ကို အတင်းဖက်ပြီး ငိုပါတော့တယ်… “ကိုရယ်… ဖေဖေသိသွားပြီလားမသိဘူး” ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲဘာပြောလို့ပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး… ပြီးမှ စU်းစားကြည့်လိုက်တော့ အဖိုးကြီးက သူ့ဟာသူ အိမ်သာတွေဘာတွေထသွားတာဖြစ်မှာပေါ့… ကျွန်တော်တို့ကသာ မလုံမလဲဖြစ်နေတာ… နန်းဖေဖေအခန်းကနေလှန်းကြည့်ရင်တောင် ဒီဘက်ကိုသေချာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး… “နန်းရယ်… နန်းဖေဖေကအိမ်သာသွားတာလားမှမသိတာ…. သူအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်မိရင်တောင် ကိုတို့နေရာကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်ရမှာလဲ…” ကျွန်တော်ပြောလိုက်မှသူလဲစU်းစားမိသွားတယ်ထင်တယ်… အငိုတိတ်သွားတယ်… ပြီးမှသူ့ကိုသူ သတိရပြီး…အဝတ်အစားတွေကမန်းကတန်းပြန်ဝတ်နေတယ်… “ကို … ဟိုဖက်လှည့်ကွာ …နန်းရှက်လို့” “ခုနကတော့ မရှက်ပဲနဲ့” “ဟာကွာ…..မပြောနဲ့….” ဆိုပြီးသူ့ဘရာလေးကိုလိုက်ရှာနေတယ်… သူ့ဘရာက ကျွန်တော်ချွတ်ပြီးဘေးမှာချထားတာ လေ… ကျွန်တော်ကပဲဘရာလေးကို ကောက်ပြီး… “လာနန်း …ကိုပြန်ဝတ်ပေးမယ်…” “အာ…ပေးပါ…နန်းဟာနန်းဝတ်မယ်…” လို့မျက်နှာနီနီလေးနဲ့ပြောပါတယ်… ကျွန်တော်ကလဲမရပါဘူး …နန်းနားကပ်ပြီး အင်းကျီလေးကိုဟကာ ဘရာလေးကို သေသေချာချာ ဝတ်ပေးလိုက်တော့ နန်းအရမ်းရှက်နေပါတယ်… “ကိုမကောင်းဘူးကွာ …နန်းကိုဒီနေ့တစ်နေ့လုံး နှိပ်စက်နေတယ်…” ကျွန်တော်လဲဘာမှပြန်မပြောပဲနန်းရဲ့ နွုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းမယ်လဲလုပ်ရော… “ကိုနော် …တော်ပြီတော်ပြီ … ပြောလို့မရင် နန်းစိတ်ဆိုးလိုက်မှာနော်” တဲ့… နန်းကပဲဆက်ပြီး “အခုဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ…” သူပြောမှသတိရတယ်…နာရီကြည့်လိုက်တော့၎နာရီတောင်ကျော်နေပြီပဲ… “၄ နာရီကျော်ပြီ” “ဟာ ဒါဆိုနန်းအိမ်ထဲပြန်ဝင်တော့မယ်… မေမေက ၅ နာရီဆိုအမြဲထတယ်…” “ဟင်…ဒါဆိုကိုလဲပြန်ရတော့မှာပေါ့” “အင်းပေါ့…” “သြော်နန်းကိုမေးရUီးမယ်… နန်းပီးသွားလားဟင်” “ဘာ ပီးတာလဲ” “အာ…နန်းကလဲ ပီးတာကိုမသိဘူးလား” “ဘာလဲ နန်းတကယ်မသိတာ” အသက် ၁ရနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပီးတာကို မသိသေးတာတော့ ကျွန်တော် တော်တော် အံ့သြောမိတယ်… “နန်းဟာလေးထဲကအကြောတွေတင်းပြီး အရည်တွေထွက်တာလေ…မဖြစ်ဘူးလား” “ဟင့်အင်း… ဟိုအရည်တော့ထွက်တယ်ထင်တယ်…” လို့မရဲတရဲလေးပြောတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးအသည်းယားသွားတယ်… “နန်းကလဲချစ်သူချင်းကိုရှက်နေသေးတယ်…” “ကိုနော် … တော်ပြီမပြောနဲ့တော့ … နန်းလဲအိမ်ထဲဝင်တော့မယ်” “ဘာလဲ … ကို့ကိုနှင်နေတာလား…” လို့ပြောလိုက်တော့ နန်းမျက်နှာလေးညှိုးသွားပြီး… “ကိုရယ်… နန်းက ကို့ကိုနှင်ရက်ပါ့မလား…” “စတာပါနန်းရယ်…စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့… ကဲ… နန်းအိမ်ထဲဝင်တော့ … ကြာလာရင်ကို ထပ်ပြီးဖက်နမ်းမိလိမ့်မယ်…” ဆိုတော့ မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး… “ဒါဆိုသွားပြီ… တာ့တာ”ဆိုပြီးနွုတ်ဆက်ပြီး ထထွက်သွားတယ်… ဒါတောင် နန်းရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှတွေကကျွန်တော့ကို ဖမ်းစားနေသေးတယ်… ။
ကျွန်တော်လဲနန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရူးတော့မှာပဲဗျာ… အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော့မှာဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဗျာ… ကျွန်တော့ဟာလေးက အရမ်းကိုတင်းနေပြီလေ… ကိုယ့်ဟာကိုပဲဖြေလိုက်ရပါတယ်… နောက်နေ့မနက် ကျောင်းကားပေါ်မှာနန်းကိုမတွေ့ရတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးစိတ်ပူသွားတယ်… မနေ့က ကိစ္စကိုသူ့မိဘတွေများသိသွားလားမသိဘူး… တွေးတွေလဲစုံနေပြီ… ကျောင်းရှေ့ကနေ နန်းဆီ phoneခေါ်ကြည့်တော့လဲ ဘယ်သူမှမကိုင်ဘူး… နန်းသူငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်တော့သူတို့လဲမသိကြဘူး… ကျွန်တော်ရင်တွေပူလာတယ်… class တက်ချင်စိတ်လဲမရှိတော့ဘူး… ဒါနဲ့ကျောင်းကနေ လစ်လာပြီး နန်းအိမ်ကိုသွားတော့ အိမ်တံခါးကသော့ခတ်ထားတယ်ဗျာ… ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ စာနဲ့ရေးပြလို့တောင်မရနိုင်ဘူး…ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး… တစ်နေ့လုံး နန်းအိမ်ရှေ့မှာထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်…ဒါပေမဲ့ ညနေစောင်းတဲ့အထိ ရဲ့ အရိပ်အရောင်တောင်မမြင်ရသေးဘူး… စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိမ်ပြန်လာတော့ ဖေက “သားရေ … မင်းဆီကိုကောင်မလေးတစ်ယောက် phone ဆက်တယ်… ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့လဲ မပြောဘူး… ဘာလဲမင်းကောင်မလေးလား…” “ဟုတ်တယ်ဖေ … နန်းမေ တဲ့IT က… ဒါနဲ့ သူ ဘာပြောသေးလဲဟင်…” “ဘာမှမပြောဘူးကွမင်းမရောက်သေးဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ ရတယ်ရတယ်ဆိုပြီး phone ချသွားတယ်… သားရေချိုးလိုက်Uီးလေ………. မန်မာနိုင်ငံက phoneလိုင်းတွေကပဲမကောင်းတာလား … နန်း ပဲအိမ်မှာမရှိတာလားတော့မသိဘူး … တစ်ညလုံး phoneဆက်တာ တစ်ခါမှကို မကိုင်ဘူးဗျာ… တစ်ညလုံးလဲအိပ်လို့မရတော့ပါဘူး… မနက်ရောက်တော့နန်းကျောင်းကားစီးနေကြနေရာလေးကို သွားစောင့်ပါသေးတယ်… အချိန်တွေသာကုန်သွားတယ်ဗျာ…ဒါနဲ့ ကျောင်းမတက်တော့ပဲ နန်းအိမ်ရှေ့မှာပဲစောင့်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…။
ဒီလိုနဲ့စောင့်နေလိုက်တာ နန်းအိမ်ရှေ့က အုပ်ခုံ အေးအေးလေးတောင် ပူသွားတယ်ဗျာ…ကျွန်တော်လဲတော်တော်ပင်ပန်းသွားပါပြီ… ဒါနဲ့ပဲ တစ်ခုခုသွားစားမယ်ဆိုပြီးအုတ်ခုံကနေအထ နန်းဖေဖေရဲ့ကား လမ်းလေးထဲကိုဝင်လာတာတွေလိုက်ပါတယ်…ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်သွားတယ်ဗျာ… ကမန်းကတန်းကြည့်လိုက်တော့ ကားမောင်းလာတာ နန်းဖေဖေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ…ကားနောက်ခန်းကိုကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော့်ရဲ့ နန်းကို တွေလိုက်ရပါတော့တယ်…အဲဒီ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်ခံစားမွုကို စာနဲ့ရေးပြလို့တောင်မရနိုင်ပါဘူးဗျာ…နန်းက ကျွန်တော့ကိုမြင်တာနဲ့ ကမန်းကတန်းဆင်းလာပြီး … “ကိုရယ်…ကိုစိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာနန်းသိပါတယ်… နန်းမေမေ သွေးတိုးပြီးမူးလဲသွားလို့နန်းတို့ဆေးရုံမှာ အချိန်ပြည့်စောင့်နေရလို့ပါ… ကို့ကိုလဲ Phone ဆက်ပါသေးတယ် …ကိုကဘယ်တွေသွားနေလဲမသိဘူး… ခါတိုင်း အဲ့ဒီ့အချိန်ဆိုအိမ်ပြန်ရောက်နေကြပါ…” “ကိုကနန်းကျောင်းမလာလို့ ဘာများဖြစ်နေပြီလဲလို့ စိတ်ပူပြီးနန်းအိမ်ရှေ့မှာလာစောင့်နေတာ… အိမ်ကလဲ သော့ခတ်ထားတော့ ပိုဆိုးသွားတယ်…” “ကို့ကိုနန်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်… အခုလည်း နန်းပစ္စည်းတွေလာယူတာ … ကမန်းကတန်းဆိုတော့ ဘာမှမယူသွားရဘူးလေ… ဖေဖေကတော့ဆေးရုံမှာပဲကျန်ခဲ့တယ်… အခုတောင် နန်းတို့အသိUီးလေးကြီးကလိုက်ပို့လို့ … ” “ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဟင်…” “ရပါတယ်ကိုရယ်… ဒါပေမဲ့အခုနန်းကိုလိုက်ပို့တဲ့Uီးလေးကြီးက ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့တဲ့ နန်းကိုဆေးရုံကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ … အဲဒါနန်း ဖေဖေ့ကို phone ဆက်ပြီးTအxi နဲ့ပဲသွားတော့မယ်… ကိုလိုက်ပို့ပေးလေ…” “လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့နန်းရယ်…” ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ကားငှားပြီးလသာဘက်ကိုသွား … တရုတ်တန်းမှာလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့လမ်းလျှောက်တော့ နန်းကကျွန်တော့ပခုံးလေးကိုမှီပြီးလျှောက်တယ်ဗျာ… ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာတော့ ကြည်နူးလိုက်တာ… လူတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကိုလင်မယားလို့ထင်နေကြတယ်ထင်တယ် … နန်းမေမေကိစ္စတောင်မေ့သွားတယ်… ဆေးရုံရောက်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲစောင့်နေပါတယ် … ခဏကြာတော့ နန်းကထွက်လာပြီး … “ကိုနန်းဒီညစော့အိပ်ရမယ် ဖေဖေက အလုပ်ကိစ္စရှိလို့တဲ့ ဒီညအပြီးလုပ်ရမှာဆိုတော့လူနာစောင့်လို့မရဘူး နန်းပဲစောင့်ရမှာ… ကိုပြန်ရင်ပြန်တော့လေ..” “ကိုလဲစောင့်ပေးမယ်လေ …” “ကိုကလဲ …ဘယ်လိုလုပ်စောင့်မှာလဲ … မေမေတို့ သိသွားမှာပေါ့ … ပြီးတော့ ဆေးရုံကခွင့်ပြုပါ့မလား ” “ကိုကနန်းမေမေမသိအောင်နေမှာပေါ့ … ပြီးတော့ ဒီမှာ ကိုယ့်အဒေါ်တစ်ယောက်ရှိတယ်…။
သူပြောရင်ရပါတယ်…” “ကိုရယ် ဖြစ်ပါ့မလား…” “ဖြစ်ပါတယ်နန်းရယ် ..ကိုအခု ကိုယ့်အဒေါ်ကိုသွားပြောလိုက်မယ်… ရရင်ကိုယ့်အိမ်ကို phoneဆက်ပြီးပြောလိုက်မယ်နော်” “ကိုဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ…” ကျွန်တော့အဒေါ်ကဒီမှာအကောင်ဆိုတော့ အေးဆေးပေါ့ … အိမ်ကိုလဲရွေ့လိုက်ပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ ညရောက်တော့ကျွန်တော်က နန်းမေမေ အခန်းအပြင်ဘက်က ကော်ရစ်တာလေးမှာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ် …နန်းကတော့ မကြာမကြာထွက်လာပါတယ် … ကော်ဖီလာတိုက်လိုက် မုန့်လာကြွေးလိုက်နဲ့ …လူနာစောင့်ရတာတောင် တော်တော်လေးကြိုက်သွားပါတယ်… နည်းနည်းမိုးချုပ်လာတော့လူတောင်တော်တော်ရှင်းသွားပါတယ် … ပြီးတော့ ဒီမှာလဲ လူနာက ၃ယောက်ပဲရှိတာကိုး…လူနာစောင့်တွေကလဲ ကော်ရစ်တာကိုမလာကြပါဘူး… ကော်ရစ်တာကလဲ အတွင်းကော်ရစ်တာဆိုတော့ဘယ်သူမှကိုမရှိတာ … ခြင်ကတော့ အမုန်းကိုစွဲတာဗျာ… နန်းကတော့ စောင်လေးလာပေးထားပါတယ်… ခဏကြာတော့ နန်းကထွက်လာပြီး … “မေမေအိပ်ပျော်သွားပြီ…”ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘေးမှာလာထိုင်ပါတယ်…ကျွန်တော်ကလဲသူ့ကိုဖက်ထာပြီး စောင်လေးခြုံပေးလိုက်တော့ နန်းရဲ့ခေါင်းလေးကျွန်တော့ ပခုံးပေါ်ကျလာပါတယ်… ကျွန်တော်လဲတင်းတင်းလေးဖက်ထားရင်းနန်းရဲ့ဆံပင်လေးတွေကို ဖွဖွလေးနန်းနေတုန်း ကျွန်တော့မျက်လုံးတွေက နန်းဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီး shirt အင်းကျီ ရဲ့ရင်ဘတ်နားကိုကြည့်မိလိုက်တော့ နည်းနည်းဟနေပြီးရင်ခုန်စရာနို့လေးတွေကြားက ဘရာပန်းရောင်လေး ကို ရေးရေးလေးမြင်နေရပါတယ်…ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး ဒီမြင်ကွင်းလေးက ကျွန်တော့ရင်ခုန်သံတွေကို တော်တော်လေးအရှိမ်မြှင့်သွားပါတယ်… နန်းက ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်နားမှာကပ်နေတော့ “ကို… ဘာလို့ ကိုအရမ်းရင်ခုန်လာတာလဲ… နန်းစိတ်တောင်ပူလာပြီ…”ဆိုပြီးသူ့လက်ဖဝါးလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ကိုဖိပေးထားတော့ ကျွန်တော်ကြည်နူးရပြန်ရောဗျာ… “နန်းအနားမှာနေရင်ကိုအမြဲရင်ခုန်နေရတာပါပဲနန်းရယ်…” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့ပါးလေးတွေကိုငုံပြီးနမ်းလိုက်တော့ နန်းမျက်နှာလေးမော့လာပါတယ်… ဒါနဲ့ပဲနန်းရဲ့နွုတ်ခမ်းလေးတွေကို ညင်ညင်သာသာပဲ စုပ်လိုက်တော့နန်းမျက်လုံးလေးတွေမှိတ်လာပြီး လိုလိုချင်ချင်ပဲတုန့်ပြန်လာပါတယ်…နန်းရဲ့အပေါ်နွုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းလိုက် အောက်နွုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းလိုက်နဲ့ လုပ်နေရာကနေကျွန်တော့ လျှာလေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထဲ့လိုက်တော့နန်းရဲ့မျက်နှာလေးပိုပိုမော့လာပါတယ်… ကျွန်တော်လဲ ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော့ညာဘက်လက်ကို နန်းရဲ့ နို့လေးပေါ်တင်လိုက်တော့ နန်းကအတင်းဖယ်လိုက်ပြီး… “ကို… ဒါဆေးရုံနော်…”တဲ့… ကျွန်တော်က ဘာမှပြန်မပြောပဲ စောင်လေးကိုနန်းပခုံးထိရောက်အောင်ခြုံပေးလိုက်ပြီး ကျွန်တော့လက်ကိုနန်းရဲ့နို့လေးပေါ်ပြန်တင်ထားလိုက်တော့ နန်းက သူ့လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော့လက်တွေကိုလာကိုင်ပါတယ်… ဖယ်တော့မဖယ်ပါဘူး…ကျွန်တော်လဲဖြေးဖြေးလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်…။
တစ်ချက်တစ်ချက်ညှစ်ညှစ်ပေးလို က်တော့နန်းကသက်ပြင်းလေးတွေချချလာတယ်လေ… ကျွန်တော်အားမရတော့ပါဘူး…နန်းရဲ့အင်းကျီလေးကိုပင့်တင်ရင်း ဘရာလေးကိုပါပင့်တင်လိုက်တယ်… နန်းကတော့မငြင်းဆန်တော့ပါဘူး… ငြိမ်ငြိမ်လေး ကျွန်တော်ကိုဖက်ထားပါတယ်… အကာအကွယ်မရှိတော့တဲ့နန်းရဲ့ပြည့်ဖြိုးတဲ့နို့လေးတွေကို စိတ်တိုင်းကျပွတ်ချေကစားရင်းနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေပေးလိုက်တော့ နန်း အသက်ရွူတွေမြန်လာပါတယ်… ကျွန်တော့ဘယ်ဘက်လက်တွေကို နန်းပခုံးအောက်ကနေ လျွိုပြီးတော့ နို့လေးတွေကိုပွတ်ပေးရင်းညာဘက်လက်ကို နန်းရဲ့ဗိုက်သားလေးတွေဆီပို့လိုက်ပါတယ်… နန်းရဲ့ဆီးခုံလေးကိုမထိတထိသွားသွားကစားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နန်းရဲဘောင်းဘီကြယ်သီးလေးကိုကိုင်လိုက်တော့နန်းကသူ့လက်ကလေးတွေနဲ့လာတားဆီးပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က မဖယ်လိုက်ပဲကြယ်သီးလေးကိုဖြုတ်ပြီး ဇစ်လေးကိုပါတခါတည်းဆွဲချလိုက်ပါတော့တယ်… နန်းကတော့ကျွန်တော့လက်တွေကို ကိုင်ထားတုန်းပါပဲ … ကျွန်တော်က ဂရုမစိုက်ပဲနန်းရဲ့ပင်တီပေါ်ကနေ ဆီခုံလေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်… ခဏကြာတော့နန်းလက်တွေဖယ်သွားပါတယ်… ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အားတက်သွားပြီး လက်ကိုပင်တီကြားထဲသွင်းလိုက်တော့ နန်းရဲ့အမွေးလေးတွေကိုစမ်းမိသွားပါတယ်…နူးညံနေလိုက်တာဗျာ … တော်တော်တောင်အံ့သြောသွားတယ်… အမွေးလေးတွေကို ဖြတ်ရင်းအကွဲကြောင်းလေးဆိုရောက်တော့ စိုစွတ်နေပါပြီ… လက်ခလယ်လေးနဲ့အကွဲကြောင်းလေးကိုဖိပွတ်ဆွဲလိုက်တော့ နန်းဆိုက “အာ…”ဆိုတဲ့အသံလေးထွက်လာပြီးကျွန်တော့လက်တွေကို လာကိုင်ပါတော့တယ်…(အဲ့ဒီ့ “အာ…”ဆိုတာ ဘယ်လိုမှရေးပြလို့မရနိုင်တဲ့အသံပါ… အနီးစပ်ဆုံးရေးထားတာပါ… ကျွန်တော်တော့ အဲ့ဒီ့အသံကိုကြားလိုက်တာ တော်တော်လေးစိတ်တွေထသွားပါတယ်…) ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမရပ်လိုက်ပါဘူး…ကျွန်တော့ လက်ခလယ်လေးနဲ့ အစိလေးရှိတဲနေရာလေးကိုဖိုပွတ်ပေးလိုက်တော့နန်းရဲတင်ပါးတွေကော့တက်လာပြီး ကျွန်တော့ကို တအားဖက်ထားတော့တာပဲ… ကျွန်တော့လက်တွေကိုခက်သွက်သွက်လေးလွုပ်ရှားလိုက်တော့နန်းက အသံတိုးတိုးလေးထွက်ပြီး မောသံလေးနဲ့ ညီးလာပါတယ်… အဲ့ဒီ့ညီးသံလေးကကျွန်တော့ကို မြန်မြန်လုပ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးလိုက်သလိုပါပဲ…ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက် နန်းပေါင်လေးတွေ ပိုပိုကားပေးထားလာတာတွေ့ရပါတယ်…နန်းအသက်ရွူသံတွေပိုပိုမြန်လာသလို ကျွန်တော့လက်တွေလည်းပိုပိုမြန်လာပါတယ် …ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတုန်း နန်းက သူ့ပေါင်တွေကို ရုတ်တရက်စိပစ်လိုက်ပြီးကျွန်တော့ လက်တွေကို တင်းတင်းကြီးဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်… နန်းရဲ့ သက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုဖြည်းဖြည်းခြင်းချလိ်ုက်သံကြားလိုက်မိတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ… “နန်း … …ပြီးသွားပြီမဟုတ်လား… ” “… …” “ဖြေလေနန်းရဲ့…” “အင်း… ဟုတ်တယ်ထင်တယ်…နန်းတကိုယ်လုံးကအကြောတွေလျော့သွားသလိုပဲ… တစ်မျိုးကြီးပဲ…” “ဘာတစ်မျိုးကြီးပဲလဲ…ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလား…” “အာ…ကိုကလဲ … မသိဘူးကွာ…တစ်မျိုးကြီးပါပဲဆို..” “နန်းမောသွားလား…” “အင်း…” “အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲသိလား…” “ဟင့်အင်း…သိဘူး..” မာစတာဘိလုပ်တယ်လိုခေါ်တယ်… တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေတာပေါ့” “ကိုကလဲ… ရှက်စရာကြီး…” “ဘာရှက်စရာလဲ…သဘာဝပဲဟာကို…” “သဘာဝလဲရှက်မှာပဲ…” “နန်းကသာပြီးသွားတယ်…ကိုကတော့ ဒုက္ခတွေရောက်လို့…” “ဟင်… ဘာလို့လဲ…” “ကိုက မှမပြီးတာ…” “ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ…” “ကို့ကိုနန်းရဲ့ညာဘက်လက်ကလေးပေး…” ရော့ဆိုပြီးလက်ဝါးလေးပေးလာတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့ ဟာလေးပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… ။
ဒါပေမဲ့နန်းကထိရုံပဲထိထားတော့ ကျွန်တော်က “ကို့ဘောင်းဘီကြယ်သီးဖြုတ်လိုက်လေ…” လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုကပါတယ်… နန်းက ကြယ်သီးလေးကိုမရဲတရဲဖြုတ်ပြီး ဇစ်ကလေးကိုပါအလိုက်တသိဆွဲချလိုက်ပါတယ်…ပြီးတော့နန်းကဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိပဲ ရပ်နေတော့ ကျွန်တော်ကပဲ နန်းလက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော့ ဟာလေးပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်… နန်းက စူးစမ်းသလိုနဲ့ ကျွန်တော့ဟာလေးကိုအောက်ခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်သပ်ပေးနေတော့ ကျွန်တော့မှာ အသည်းတွေကိုယားလို့ … ကျွန်တော့လက်တွေက မနေနိင်တော့ပဲ နန်းဟာလေးကို ပင်တီလေးပေါ်ကနေပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်… နန်းရဲ့ အသက်ရွုသံတွေမြန်လာသလို နန်းလက်ကလေးတွေကလည်းပွတ်ပေးနေရာကနေ ကျွန်တော့ ဟာလေးကို ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လာပါတယ်… ကျွန်တော်လဲစိတ်တွေတအားထန်လာပါပြီ…ကျွန်တော့လက်တွေကို နန်းပင်တီလေးထဲ ပြန်ထည့် လိုက်တော့ နန်းကလည်းသူ့လက်တွေကကျွန်တော့ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးထဲ အလိုက်တသိ တိုးဝင်လာပါတော့တယ်… စောင်တစ်ထည်ရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတော့တာပဲဗျာ… ကျွန်တော်ကလက်ခလယ်လေးနဲ့ နန်းရဲ့အစိလေးကိုပွတ်သပ်ကစားရင်း… “နန်း … ကို့ဟာလေးကိုလက်နဲ့ ဆုပ်ပြီးတော့ နန်းလက်ကို အပေါ်အောက် ကစားပေးပါလား…” လို့ပြောလိုက်တော့ နန်းကမလုပ်တက်လုပ်တက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတော့တာပဲ… နန်းရဲ့လက်ဖဝါးနုနုလေးတွေကကျွန်တော့အတွက်တော့ အထိအတွေ့ အသစ်ပါပဲ… ပြီးတောင်ပြီးချင်လာလို့ထိန်းနေရသေးတယ်… ကျွန်တော့်နွုတ်ခမ်းတွေက နန်းဆံပင်တွေကိုနမ်းနေရင်း နန်းရဲ့မျက်နှာလေးမော့လာတော့နန်းရဲ့နွုတ်ခမ်းတွေကို ရမက်ဆန်ဆန် စုပ်နမ်းပစ်လိုက်မိတယ်… တစ်ခါတစ်ခါ နန်းရဲ့ဟာလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင် နန်းရဲ့လက်တွေက ခဏရပ်ရပ်သွားတက်ပါတယ်…ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး… ခဏကြာတော့ နန်း အသက်ရွူသံတွေ တအားမြန်လာပါတယ်…နန်းပြီးတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့ ကျွန်တော်လဲစိတ်လျှော့လိုက်တော့တယ်…နန်းပြီးပြီး၂စက္ကန့်လောက်အကြာမှာပဲ ကျွန်တော်လဲပြီးသွားပါတယ်… နန်းရဲ့လက်တွေကမရပ်သေးလို့နန်းကို ရပ်ဖို့ပြောလိုက်ရသေးတယ်… နန်းလက်မှာလဲပေကုန်ပါပြီ… စောင်မှာတောင်နည်းနည်းပေသွားသေးတယ်…ကျွန်တော်လဲနန်းကိုဖက်ပြီး မျက်စိလေးမှိတ်ထားလိုက်တယ်… သူကလည်းကျေနပ်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော့ကို ပြန်ဖက်ထားပါတယ်… ခဏကြာတော့ နန်းက “ကို … နန်းလက်မှာဘာတွေပေကုန်တာလဲဟင်…” တဲ့… “နန်းပြီးသွားတော့ ထွက်သလို… ကိုပြီးသွားတော့လဲ အရည်တွေထွက်တာပေါ့နန်းရဲ့…” “ဒါဆို ၁၀ တန်းတုန်းကသင်ရတဲ့ သုတ်ကောင်နဲ့ သားUနဲ့ ပေါင်းပြီး ကလေးရတယ်ဆိုတာ ကိုကထွက်တဲ့ အရည်နဲ့နန်းဆီကထွက်တဲ့အရည်ပေါင်းမှဖြစ်တာပေါ့ … ဟုတ်တယ်မှတ်လား…” “မဟုတ်ဘူးနန်းရဲ့…ကို့ဆိုကထွက်တဲ့ သုတ်ကောင်လေးတွေနဲ့ နန်း ဆီက တစ်လတစ်ခါကြွေတဲ့ သားU ပေါင်းမှကလေးဖြစ်တာ… နန်းဆီကထွက်တဲ့အရည်နဲ့မဟုတ်ဘူး…” “သြော်… နန်းသိပြီ…ဟိုဟာမလာခင် သားUကြွေတယ်ဆိုတာလေ…” “အင်းဟုတ်တယ်….” ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်တော့နန်းကျွန်တော်နဲ့ နည်းနည်းပွင့်လင်းလာပါတယ်… ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းတစ်ညလုံး ဖက်ပြီးတော့ စကားတွေများကြီး ပြောဖြစ်ပါတယ်… ။
အဲ့ဒီ့ညလေးကတော့ကျွန်တော့ဘဝရဲ့ ဘယ်လိုမှမမေ့နိုင်တဲ့ ညလေးပါပဲဗျာ… ဆေးရုံမှာတစ်ညပဲစောင့်လိုက်ရပါတယ်… နောက်နေ့တွေကျတော့ နန်းဖေဖေက အားသွားပြီလေ… ဆေးရုံကလဲ၃ရက်လောက်ပဲတက်ရတာပါ… ဘာမှသိပ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ… နန်းလည်း အခုမှပဲကျောင်းပြန်တက်ရပါတယ်… နန်းနဲ့ကျွန်တော် ဆေးရုံစောင့်ပြီးကတည်းကတော်တော်ပွင့်လင်းသွားတယ်ဗျ… ကျောင်းရဲ့ အမှောင်ကျကျနေရာလေးတွေကိုလဲ နှစ်ယောက်သားတော်တော်သွားဖြစ်နေပြီ… ဒီလိုမထိတထိ ကိစ္စတွေကများလာတော့ကျွန်တော်လဲအဆုံးအစွန်အထိသာရောက်ချင်စိတ်က တစ်ချိန်လုံးကြီးစိုးနေတော့တာပေါ့…နန်းကိုလဲ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောရင်း သွေးတိုးစမ်းစမ်းနေလိုက်တယ်… တစ်ရက်ကြတော့ကျွန်တော့ mp4 ထဲကို Jအpအn အပြာကားလေးတစ်ခွေထည့်လာလိုက်တယ်…(soft core လေးပါ…)နန်းနဲ့တွေ့တော့ ခါတိုင်းသွားနေကြ drအwing အဆောင်က လူမလာတဲ့အခန်းလေးထဲကိုခေါ်သွားလိုက်ပြီးခါတိုင်းလိုပဲ နွုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက် ပါးလေးတွေနမ်းလိုက်လုပ်နေရာကနေ “နန်း…” “ဟင်…“ “နန်းကို …ကိုပြစရာတစ်ခုရှိတယ်… ” “ဘာပြမှာလဲ…” “ခဏ” ဆိုပြီးလွယ်အိပ်ထဲက mp4 လေးကိုထုတ် … eအrphone လေးကို နန်းနားမှာတစ်ဖက်ကျွန်တော့နားမှာ တစ်ဖက်တပ်ပေးလိုက်တယ်… “ဘာလဲ…ဘာသီချင်းဖွင့်ပြမလို့လဲ…” “သီချင်းမဟုတ်ဘူးနန်းရဲ့…” “ဒါဆိုဘာလဲ… ပြလေ…” ကျွန်တော်ကအဆင်သင့်ထည့်လာတဲ့ ကားလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ စစချင်းမှာ Jအpအn မချောချောလေး က အခန်းတစ်ခုထဲမှာတစ်ယောက်တည်းစာတွေလုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးနဲ့စလာတော့နန်းက ဘာလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့မေးငေါ့ပြပါတယ်… ကျွန်တော်က “ဆက်ကြည့်လေ…”လို့ပြောလိုက်တော့လဲ နာခံပါတယ်… ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Jအpအn မလေးစာလုပ်နေတဲ့အခန်းထဲကိုကောင်လေးတစ်ယောက်ဝင်လာပြီး မပြောမဆိုနဲ့ ကောင်မလေးကို အတင်းဖက်နမ်းပါတော့တယ်…တဆက်တည်း ကောင်လေးရဲ့လက်တွေက ကောင်မလေးရဲ့ပြည့်တင်းနေတဲ့ နို့လေးတွေကိုပွတ်ပေးရင်း ကောင်မလေးရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပစ်နေပါတယ်… နန်းကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်တောင်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေတယ်ဗျ… ရုပ်ရှင်က ကြမ်းလာပါတယ်…။
ကောင်လေးကကောင်မလေးရဲ့ ပင်တီကိုပါချွတ်လိုက်ပြီး အကွဲကြောင်းလေးကို သူ့ရဲ့လျာလေးနဲ့ လျက်တဲ့အခန်းလည်းရောက်ရော နန်းက… “ကိုကွာ …ဘာတွေလာကြည့်ခိုင်းနေတာလဲ…”ဆိုပြီး mp4 screen လေးကို သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့ကွယ်ထားပါတော့တယ်… “နန်းကလည်းကွာ …ကိုကြည့်စေချင်တာကို…” “အာ…ကိုကလဲမျက်စိရှက်စရာကြီး…” “ဒါဆိုနန်းမကြည့်တော့ဘူးပေါ့…” “အင်း…” ကျွန်တော်ကတင်းသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ mp4 ကိုပိတ် eအrphone တွေကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တော့နန်းစိတ်ပူသွားပါတယ်… “ကို…နန်းကိုစိတ်ဆိုးသွားလားဟင်…” “…. … ” ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောတော့နန်းက သက်ပြင်းချရင်း… “ကို… … ကိုရယ်…နန်းကို့စကားနားထောင်ပမယ်… စိတ်မဆိုးနဲ့တော့နော်…” လို့တောင်းပန်တဲ့လေသံလေးနဲ့ပြောလာတော့လဲ “ဒါဆိုရော့နန်းကိုတိုင်ဖွင့်ပေး…” ဆိုပြီး mp4 လေးကို ပေးလိုက်တယ်… “ကိုကဘယ် fileမှာထည့်ထာလဲ နန်းမှမသိတာ…” “video ထဲက ……… ထဲမှာ…” နန်းပြန်ဖွင့်လိုက်တော့အစကနေပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ … ကောင်လေးကကောင်မလေးရဲ့အကွဲကြောင်းလေးကိုလျက်တဲ့အခန်းလဲပြန်ရောက်လာရော နန်းက မျက်နှာလေးနီလာပြီးရှက်နေတယ်လေ… ကျွန်တော်က နန်းကိုဖက်ထာရင်း လက်တွေက နန်းရဲ့ ကျောပြင်လေးကို မသိမသာပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်… ရုပ်ရှင်ကလဲကောင်းပါတယ်… ကောင်မလေးက သူ့ကိုလျက်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ခေါင်းကို ဆွဲမော့လိုက်ပြီး…ကောင်လေးကိုမတ်တပ်ရပ်စေလိုက်တယ်… ပြီးတော့ ကောင်မလေးကပဲ ကောင်လေးရဲ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ကောင်လေးရဲ့ဟာလေးကို သူ့ပါးစပ်လေးနဲ့ အားရပါးရ စုပ်နေတော့တာပဲ…ဒီအခန်းလဲရောက်ရော နန်းက မျက်နှာလွဲသွားလေရဲ့… “နန်းကလဲ ကြည့်ပါဆို…” “ကိုရယ်…နန်းမျက်နှာပူလာပြီ…” “ဘယ်သူ့ကိုရှက်စရာရှိလဲ… ဒီမှာနန်းနဲ့ကို နှစ်ယောက်ပဲရှိတာကို..” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နန်းရဲ့ပေါင်သားလေးတွေကို ရွရွလေး ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်… ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကတော့တော်တော်လေးကို ခရီးရောက်နေပါပြီ…။
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကိုစာရေးစားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးပေါင်လေးတွေကိုကားခိုင်းထားလိုက်တယ်… ပြီးတော့တော်တော်လေးကို တင်းမာနေတဲ့သူဟာလေးနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကိုတေ့ပြီးဖြေးဖြေးချင်းဖိသွင်းလိုက်တယ်လေ… သူ့ဟာလေးကို အဆုံးအထိသွင်းလိုက်နည်းနည်းလေးပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်နေလိုက်တာ ကောင်မလေးခမျာမျက်နှာလေးရွုံ့မဲ့ပြီးတောင် ငြီးတွားနေရတယ်… နန်းတစ်ယောက်တော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာမျောပါသွားပါပြီ… ကျွန်တော့ လက်တွေကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး… လက်တစ်ဖက်နဲ့နန်းရဲ့နို့အုံလေးကို ရွရွလေးကစားနေပြီး… နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ နန်းရဲ့ ထမီပေါ်ကနေဆီးစပ်လေးကို ဖိပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်လေ… ကျွန်တော်သိပါတယ် နန်းတော့စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်း ထကြွလာနေပါပြီ… ရုပ်ရှင်ထဲမှာလဲ ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းရင်းနောက်ဆုံးတော့ ကောင်လေးရော ကောင်မလေးပါ တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်းပြီးသွားကြပါတယ်… နန်းကိုကြည့်လိုက်တောလည်း နန်းက ကျွန်တော့ကိုရီဝေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေလေရဲ့… ကျွန်တော်က အလုပ်များနေတဲ့ကျွန်တော့လက်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီး နန်းကို ရမက်ဆန်ဆန်ပဲ နမ်းပစ်လိုက်တယ်… နန်းလဲ တော်တော်လေးစိတ်ပါနေပြီထင်ပါတယ်.. လိုလိုချင်ချင်ပဲပြန်နမ်းတဲ့အပြင် သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့တောင်ကျွန်တော့ ကျောကုန်းကို ပွတ်ပေးနေသေးတယ်… ကျွန်တော်က နမ်းနေရာကနေ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီး… “နန်း … ကိုနန်းနဲ့အရမ်းချစ်ချင်တာပဲ… ကိုနဲ့နန်း တစ်နေရာကိုသွားရအောင်နော်…” လို့ပြောလိုက်တော့နန်းမှာ ငြင်းဆန်နိုင်မဲ့အားတွေမရှိတော့ပါဘူး… ကျွန်တော်လဲအချိန်ကုန်မခံတော့ပဲ ကျောင်းကနေ ခိုးထွက် … ပြီးတော့ကျွန်တော့တို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို သန်လျင်ဈေးနားက တည်းခိုခန်းလေးကိုUီးတည်လိုက်တယ်… ဟိုရောက်တော့ ၂ယောက်ခန်းလေးယူလိုက်ပြီးစားစရာနည်းနည်းပါမှာလိုက်တယ်… နန်းကတော့ ရှက်နေတယ်နဲ့တူတယ်… ခေါင်းလေးကိုတချိန်လုံး ငုံ့ထားလေရဲ့ … တည်းခိုခမ်းလေးက မဆိုးပါဘူး… အခန်းတွေကသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေးတွေ… ရေချိုးခန်းလေးကလည်း သန့်နေတာပဲ… နန်းကအခန်းထဲလဲရောက်ရော ကျွန်တော့လက်တွေကို တင်းတင်းပဲဆုပ်ကိုင်ထားပါတယ်…နန်းရင်တွေခုန်နေပြီထင်တယ်… နှစ်ယောက်အိပ်ကတင်ကိုလဲမြင်ရော “ကို ခဏနော်”ဆိုပြီးရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားလိုက်တာ တော်တော်နဲ့ထွက်မလာပါဘူး…မှာထားတာတွေတောင်လာပို့သွားပြီ … ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ အခန်းတံခါးကို Lock ချလိုက်ပြီးရေချိုးခန်းတံခါးကိုသွားခေါက်ရပါတယ်… “နန်း… ဘာလုပ်နေတာလဲကြာလိုက်တာနန်းရာ… ဒီမှာ စားစရာတွေတောင်ရောက်လာပြီ…” အဲ့ဒီတော့မှ နန်းကမျက်နှာနီနီလေးနဲ့ထွက်လာပါတယ်… ကျွန်တော်က နန်းကိုကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး လက်ကလေးတွေကိုကိုင်ကာ… “နန်း…နန်းစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်… ဒါနန်းနဲ့ကို့ အတွက် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပဲ…နန်းဒီကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာပြလိုက်တာပဲ…ကိုအရမ်းကျေနပ်တယ်… ပျော်လဲပျော်တယ်… ပြီးတော့ ကို နန်းကို အရမ်းချစ်တယ်နန်းရယ်…”လို့ ရင်ဘတ်ထဲကလေသံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်… “နန်းလဲ ကို့ကိုအရမ်းကိုချစ်ပါတယ်ကိုရယ်… ဒါပေမဲ့ ဟိုဟာဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…” ဆိုပြီး သူ့ဗိုက်ကလေးကိုပုတ်ပြပါတယ်… ကျွန်တော်က “ဒီဟာနဲ့ဆိုမဖြစ်ပါဘူး…” ဆိုပြီး ကွန်ဒုန်း လေးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ “ဟင် …ကိုကဒါကိုအမြဲဆောင်ထားတယ် ဟုတ်လား…” “နန်းကိုယ့်ကိုမစော်ကားနဲ့နော်… ဒီစကားက ကိုဘာဖြစ်သွားစေမလဲဆိုတာနန်းမသိဘူးလား…” “ကို ရယ်…စိတ်ကလဲဆိုးမယ်ဆိုတာကြီးပဲ… နန်းကစတာပါ… ကို့ကိုယုံပါတယ်… ယုံလို့ပဲဒီအထိတောင်လိုက်လာတာပဲဟာကို…” လို့ပြောလိုက်တော့လဲ ကျွန်တော့မှာ ကျေနပ်သွားတာပါပဲ…ပြောမဲ့သာပြောတာ ကျွန်တော့အတွက်လဲ ဒါကပထမဆုံးဆိုတော့ စိတ်လွုပ်ရှားနေတာပေါ့ …နန်းဆိုပိုဆိုး… ။
ရင်တွေခုန်နေလိုက်တာ ဒီကနေတောင်ကြားနေရတယ်… ကျွန်တော်လဲအချိန်ဆွဲမနေချင်တော့ပါဘူး… နန်းကိုယ်လေးကိုဖက်ပြီး နန်းရဲ့ နားရွက်ကလေးကိုစနမ်းလိုက်တယ်… နားပေါက်မရှိတဲ့ နန်းရဲ့ နားရွက်လေးနီရဲသွားတာပဲဗျာ… ခါတိုင်းအလုပ်များနေကြ ကျွန်တော့လက်တွေကို သွားနေကြနေရာတွေကို မသွားတော့ပဲနန်းရဲ့ဆံပင်လေးတွေကိုပဲ တယုတရ ကိုင်တွယ်နေလိုက်တယ်… ကျွန်တော့ အနမ်းတွေကိုနွုတ်ခမ်းတွေဆီလဲ ပြောင်းလိုက်ရော နန်းမျက်လုံးတွေမှေးဆင်းသွားပါပြီ…နန်းရဲ့နွုတ်ခမ်းပါးပါးလေးတွေက အရမ်းကို နမ်းလို့ကောင်းတယ်ဗျာ… ကျွန်တော်ကအောက်နွုတ်ခမ်းကိုစုပ်နေရင် နန်းက ကျွန်တော့ အပေါ်နွုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နေတယ်လေ…လိမ္မာလိုက်တာ… ဒီလိုနဲ့ အပေါ်ကိုပြောင်းလိုက်အောက်ကိုပြောင်းလိုက်နဲ့နည်းနည်းလေးကြာလာတော့ ကျွန်တော့လျာလေးကို ထိုးသွင်းလိုက်တယ်… နန်းဒီနေ့တော်တော်အလိုက်သိတယ်ဗျာ… ကျွန်တော့လျာလေးကို သူ့လျာလေးနဲ့ကစားတဲ့အပြင် ကျွန်တော့လျာတစ်ခုလုံးကိုသူ့ပါးစပ်လေးနဲ့ အတင်းစုပ်ယူလိုက်တယ်လေ… ကျွန်တော်တော်တော်ချစ်သွားတယ်… ဘာရမလဲကျွန်တော်လဲ အားကျမခံ သူ့လျာလေးကို အတင်းပြန်ရှာပြီး စုပ်တော့တာပေါ့… နန်းလက်တွေကထားစရာနေရာဘူးထင်တယ်… ကျွန်တော့ ကျောပြင်ကိုပဲ အကြောင်းမဲ့ ပွတ်ပေးနေတယ်လေ…နည်းနည်းကြာလာတော့ နန်းမောပါတယ်… ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ နွုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်ပြီးနန်းလည်တိုင်လေးကို လျာလေးနဲ့လျက်နေလိုက်တယ်… တစ်ခါတစ်ခါ နားရွက်အောက်ခြေကလည်ပင်းသားလေးတွေကိုနွုတ်ခမ်းနဲ့ စုပ်လိုက်ရင် နန်းရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့ကျောပြင်ကိုအတင်းဖြစ်ညှစ်တော့တာပဲ… ဘယ်လောက်အထိ နန်းလည်ပင်းမှာကြာသွားလဲတော့မသိဘူး …နန်းလည်းတိုင်လေးဘေးမှာ အနီကွက်ကလေးတွေကို ပွလို့… ကျွန်တော်လဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ညွန့်လေးကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်… ရင်ညွန့်လေးကိုနမ်းလိုက်ရင်နမ်းရဲ့ခေါင်းလေးမော့မော့သွားတယ်ဗျ… နမ်းနေရင်နဲ့ပဲ နန်းအင်းကျီရဲ့နှိပ်စိကြယ်သီးလေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြုတ်လိုက်တော့… နန်းရင်ဘတ်လေးဟသွားပြီးဘရာ အနက်ရောင်လေးပေါ်လာပါတော့တယ်… ဘရာလေးကနန်းရဲ့ပြည့်ဖြိုးတဲ့နို့အုံလေးကို တစ်ဝက်ပဲဖုံးအုပ်ထားနိုင်တယ်ဗျ… နန်းရဲ့အသားဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ ဘရာအနက်ရောင်လေးက အရမ်းကို mအtch ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်မှင်သက်ပြီး ကြည့်နေမိတယ်… “ကိုရယ်…ဘာလို့အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတာလဲ… နန်းမနေတက်တော့ဘူး…” “နန်းရဲ့အလှမှာကိုယ်မျောသွားလို့ပါ… လှလိုက်တာနန်းရယ်… ”ဆိုပြီး ရင်နှစ်မွာကြားထဲကအချိုင့်လေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်တယ်… လျာလေးတွေနဲ့ ရင်နှစ်မွာကြားလေးထဲကို ကလိနေတော့ နန်းအသည်းတွေယားနေပါပြီ…နန်းရင်ခုန်သံတွေဆို ပေါက်ထွက်မတက်ပါပဲ… ကျွန်တော့နွုတ်ခမ်းတွေကလည်းဘရာလေးအပေါ်ကလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေမိပါပြီ…ကျွန်တော့်ဟာလေးကလဲ အောက်ခံဘောင်ဘီထဲမှာ အတင်းကို ရုံးကန်နေပါပြီ… ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့ကျောကိုကြောင်းမဲ့ပွတ်သပ်နေတဲ့ နန်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီး ကျွန်တော့် ဟာလေးပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တော့ နန်းက ပုဆိုးပေါ်ကနေဖြည်းဖြည်ုးလေး ပွတ်ပေးနေတယ်… ကျွန်တော်က လည်းအသည်းယားအောင်လုပ်နေတော့ နန်းမနေနိုင်တော့ပါဘူး… ကျွန်တော့ဟာလေးကိုပွတ်ပေးနေရာကနေ ဆုပ်ချေလာကာ… နန်းလက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော့လက်ကို ဆွဲယူပြီး ညာဘက်နို့အုံလေးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်လေ… ကျွန်တော်တော်တော်လေးကျေနပ်သွားတယ်… ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လဲ အလိုက်တသိနဲ့ ဘရာပေါ်ကနေနို့သီးခေါင်းလေးကို လိုက်ရှာပြီး လက်ညှိုးလက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်ချေပေးလိုက်တော့နန်းရဲ့ တီးတိုးညီးသံလေး ထွက်လာပါတော့တယ်… ။
ပြီးတော့ နန်းရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့ကိုဟာလေးကို ဖြစ်ညှစ်ပေးနေရုံမကပဲ Uတွေကိုပါပွတ်သပ်ကစားနေတယ်လေ… နန်းလည်းတဖြည်းဖြည်းရဲလာပါပြီ… ကျွန်တော်လဲ နန်းကိုမထိတထိလုပ်နေရာကနေ နန်းရဲ့ဘရာချိတ်ကလေးကိုကျောဘက်ကိုလက်လျိုပြီး ဖြုတ်လိုက်တော့ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နို့လေးတွေကိုအကာအကွယ်မဲ့တွေလိုက်ရပါတယ်… ကျွန်တော့နွုတ်ခမ်းတွေ မနေနိုင်တော့ပါဘူး…နန်းရဲ့ဘယ်ဘက်နို့သီးခေါင်းနီနီလေးကို ငုံ့စို့လိုက်မိတော့တာပဲ… စို့ရင်းကနေလက်တစ်ဖက်ကလဲ ညာလက်နို့လေးကို ကစားနေလိုက်တယ်… ကျွန်တော့ကို ပွတ်သပ်ဖြစ်ညှစ်နေတဲ့နန်းရဲ့လက်တွေ တအားကြမ်းလာပြီး နန်းရဲ့အသက်ရွူသံတွေလည်း ပြင်းထန်လာတယ်ဗျ…နန်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလဲ ကျွန်တော့ဆံပင်တွေကို ထိုးဖွနေလိုက်တာတစ်ခေါင်းလုံးရွုပ်ပွကုန်ပါပြီ… ခဏကြာတော့ နွုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနန်းရဲ့ဗိုက်သားလေးတွေဆီပို့ဖြစ်လိုက်တယ်… ချက်ကလေးကိုလဲ လျာလေးနဲ့ထိုးလိုက်ရောနန်းကော့တက်လာပါလေရော… ကျွန်တော့ဟာလေးကိုကစားနေတဲ့နန်းရဲ့လက်တွေကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်ပြီး… နန်းရဲ့ထမီလေးကို ဖြေးဖြေးလေးချွတ်လိုက်တယ်… နန်းရဲ့ ပင်တီလေးကလဲ အနက်ရောင်လေးပဲ… ကျွန်တော့နွုတ်ခမ်းတွေကချက်ကလေးကို ကစားရင် လက်လေးတွေနဲ့ နမ်းရဲ့ပေါင်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်…လက်ကလေးတွေက ပေါင်ရင်းက အတွင်းသားလေးတွေဆီရောက်သွားတော့ နန်းက ပေါင်တွေကိုပိုပိုကားပေးလာတယ်လေ… ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က နန်းဟာလေးကိုမထိပဲ ပေါင်းတွင်းသားတွေကိုသာဂရုတစိုက် ပွတ်သပ်ပေးနေတော့ နန်းမနေနိုင်တော့ပါဘူး… “ကိုရယ်… နန်းအရမ်းမောနေပြီ…”လို့ ချစ်စရာလေသံလေးနဲ့ဖွင့်ပြောလာပါတယ်… ကျွန်တော်လဲနန်းကိုသနားသွားပြီး ပင်တီလေးပေါ်ကနေအမွေးလေးတွေကို ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်…နန်းတင်ပါးတွေတောင် ကော့ကော့တက်လာပါပြီ… ဒါနဲ့ ပင်တီလေးကို ချွတ်လိုက်တော့တစ်ခါမှမတွေ့ရသေးတဲ့ နန်းရဲ့ ဟာလေးကို အနီးကပ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်…အမွေးရေးရေးလေးတွေကြားက စိနေတဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့နည်းနည်းလေးဖြဲလိုက်တော့ အရည်တွေစိုရွဲနေတဲ့ နွုတ်ခမ်းသား နီနီလေးတွေပေါ်လာတော့တာပဲ… ကျွန်တော်လဲ မနေနိုင်တော့ပါဘူး… ကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့အတိုင်းလျာလေးနဲ့ ထိုးရက်လိုက်တော့ … နန်းက “အာ .. ကိုဘုန်းနိမ့်ကုန်မယ် ဘာတွေလျောက်လုပ်… အာ… shhhh … အာ … ” စကားတောင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး…နန်းတစ်ယောက် ကော့လန်နေတော့တာပဲ… ကျွန်တော်ကလည်း လျာလေးနဲု့အစိလေးရှိတဲ့နေရာလေးကို လျက်လိုက် .. အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျောက်လျက်လိုက်နဲ့ … အရသာလေးကတော့ငန်ကြိကြိလေးဗျ…။
အနံ့အသက်တော့ ကောင်းပါတယ်… နန်းက အသန့်ကြိုက်တယ်လေ… ဒီလိုနဲ့လျာစွမ်းပြလိုက်တာ နန်းတစ်ယောက် တစ်မိနစ်တောင်မကြာဘူးပြီးသွားပါတယ်… “ကို… … … အား … … အ …နန်း… ပြီးသွားပြီ…” ထူးဆန်းတယ်ဗျ …ယောက်ကြားလေးတွေပြီးရင် အရည်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်လေ… မိန်းကလေးတွေပြီးတာကြတော့သတိတောင်မထားမိဘူး… ဒါပေမဲ့ နန်းတင်ပါးတွေကော့တက်လာပြီးတစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်သွားတာတော့သတိထားမိလိုက်တယ်… ကျွန်တော်လဲနန်းဟာလေးဆီကခွာလိုက်ပြီး… နွုတ်ခမ်းလေးတွေကို တယုတယနမ်းနေလိုက်တယ်… ခဏကြာတော့ရပ်လိုက်ပြီး နန်းမျက်နှာလေးကိုပဲ ကြည့်နေလိုက်တော့ နန်းက ရုတ်တရက်ကျွန်တော့နှဖူးလေးကို နမ်းလိုက်ပြီး… “ကိုရယ်… နန်းကို့ကိုဘာလို့အဲ့လောက်ချစ်သွားလဲမသိဘူး…” တဲ့… ကဲ … ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြွေသွားမလဲဆိုတာ…. “နန်း… ကိုနန်းကိုပါးစပ်နဲ့လုပ်ပေးတာ ကောင်းလား…” “အင်း…” “လက်နဲ့လုပ်တာ နဲ့ပါးစပ်နဲ့လုပ်တာ ဘယ်ဟာပိုကောင်လဲ..” “ဟို…. ပါးစပ်နဲ့…” “ဒါဆိုနန်း ကို့ကိုရောပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးနိုင်ပမလား…” နန်းခဏတော့တွေဝေသွားတယ်…ပြီးမှ အင်းဆိုပြီး ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြတော့ ကျွန်တော့မှာ ပျော်သွားတာပဲ… … “ဒါဆို နန်းဟာနန်းပဲကို့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပေးနော်…” လို့ဆိုတော့လဲ နန်းက လိုက်နာပါတယ်… ကျွန်တော့အင်းကျီလေးကို အရင်ချွတ်ပေးပြီး ကျွန်တော့ ပုဆိုးကို ဖြည်ချလိုက်တော့အောက်ခံဘောင်ဘီ အနက်ရောင်လေးပေါ်လာတာပေါ့… အောက်ခံဘောင်းဘီထဲမှာတောင် ရုံးကန်နလို့ဖုအိဖေါင်းလေးတောင် ဖြစ်နေပါပြီ… နန်းက မရဲတရဲနဲ့အောက်ခံဘောင်ဘီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့ ဟာလေးက အစွမ်းကုန် ထောင်မတ်နေတယ်လေ…နန်းက ကျွန်တော့ဟာလေးကိုလဲမြင်ရော ကျွန်တော့ မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပါတယ်… ကျွန်တော်ကခေါင်လေးညှိမ့်ပြလိုက်တော့ သူ့လက်နွေးနွေးလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့ဟာလေးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်… ကျွန်တော်က “နန်း … အရည်ပြားလေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်” လို့ဆိုတော့ နန်းဆွဲချလိုက်တာ ကျွန်တော့ ဒစ်ကလေး ပေါ်လာပါတော့တယ်…နန်းက အံ့သြ သလိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်း သူ့ ပါးစပ်လေးနဲ့ ကျွန်တော့ဟာလေးကိုစငုံလိုက်ပါတယ်… ကျွန်တော့် ဘဝမှာ တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့ အရသာထူးကိုရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ… နန်းပါးစပ်နွေးနွေးစိုစို လေးက ကျွန်တော့ဟာလေးထိပ်ပိုင်းကို တစ်မျိုးလေးကိုဖြစ်စေတာဗျ… မပြောပြတက်ဘူးဗျာ… နန်းလည်း ခုနကကြည့်ထားတဲ့ Jအpအn ကားလေးကိုသတိရသွားတယ်ထင်တယ်… japan မလေးလုပ်သလို ကျွန်တော့ ဟာလေးထိပ်ပိုင်းကို သူ့ နွုတ်ခမ်းတွေနဲ့ဖိပြီးအထက်အောက်ကစားနေလိုက်တာ ကျွန်တော့မှာ အရှင်လတ်လတ်ကို နတ်ပြည်ရောက်နေသလိုပါပဲ… တစ်ချက်တစ်ချက်သွားကလေးတွေနဲ့ ခြစ်မိသွားရင်တော့ နည်းနည်းနာတယ်ဗျ… ထိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲ လုပ်နေတော့ကျွန်တော် အသည်းယားလာပြီး တင်ပါးကိုကော့ကော့ပြီး ပိုပိုဝင်အောင် ထိုးလိုက်တော့ … “ကိုရယ်… နန်းဒီမှာအန်ထွက်တော့မယ်… အရမ်းမထိုးထဲ့ပါနဲ့နော်…”တဲ့… ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲသနားသွားပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တော့ နန်းက အရင်တစ်ခါထက်ပိုပိုဝင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လေ… မလုပ်တက်လုပ်တက်နဲ့လုပ်တာဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော့ အတွက်လည်း ပထမဆုံးအတွေ့ အကြုံဆိုတော့ ပြီးချင်လာတယ်… ။
ခဏကြာတော့ နန်းပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပြီးလိုက်မိတယ်…နန်းက ပြီးနေတုန်းကျွန်တော့ဟာလေးကို ထုတ်မပစ်လိုက်ပါဘူး… အရည်တွေကိုလဲမြိုချလိုက်တယ်လေ… ကျွန်တော် နန်းကို ပိုပိုပြီးချစ်သွားတယ်ဗျာ… သူရောကျွန်တော်ရောနှစ်ယောက်လုံး မောသွားပြီး အိပ်ယာလေးပေါ်မှာ ဖက်ပြီ ခဏမှိန်းနေလိုက်ကြတယ်…ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့ကောင်လေးလဲ ပြန်ထောင်လာပါပြီ… ဒါနဲ့ နန်းကို ဖက်ပြီးသေသေချာချာလေးနမ်းလိုက်တော့ နန်းကလဲ လိုလိုချင်ချင်ပါပဲ … လက်တွေက နို့လေးတွေကိုကစားရင်း နန်းလက်တစ်ဖက်ကို ကျွန်တော့ ဟာလေးဆီပြန်တင်ပေးလိုက်တော့ နန်းကအလိုက်တသိပဲပွတ်သပ်ပေးနေတော့တယ်… ကျွန်တော် လက်တဖက်ကနန်းဟာလေးဆီသွားပြီး လက်ခလယ်လေးနဲ့နန်းရဲ့နွုတ်ခမ်းသားလေးဆီနည်းနည်းလေးထိုးသွင်းလိုက်တော့နန်းကိုယ်လေးတစ် ချက်တွန့်သွားပါတယ်… ကျွန်တော်က ဆက်ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်တော့လက်ခလယ်လေးက အရမ်းနူးညံ့တဲ့ အတွင်းနံရံလေးတွေကို သွားစမ်းမိပါတယ်…အသွင်းအထုတ်လေးနည်းနည်းလုပ်လိုက်တော့ နန်းက “ကို … နန်း နာတယ်ကိုရယ်… လက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်…” “ဟုတ်လား. .. နန်း …အရမ်းနာလို့လား…” “အင်း …နည်းနည်းတောင်အောင့်တယ်…” “ခဏလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်…” ဆိုပြီး နွုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုအသာဖြဲပြီး ကြည့်လိုက်တော့နန်းရဲ့ အစိ လေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်… “နန်း… ဒီလိုပဲပထမဆုံးအခါမှာဆို နည်းနည်းနာတက်တယ်လို့ကို ကြားဖူးတယ်…” “ဟုတ်လား…” “ကို မနေနိုင်တော့ဘူး…ကို့ဟာလေးကို ထည့်လိုက်ချင်နေပြီ…” “အရမ်းနာမှာလားဟင်… ” “သိပ်မနာပါဘူး နန်းရယ်…နန်းနာတယ်ဆိုကို့ကိုပြောလေ… နော်..”ဆိုတော့ ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြပါတယ်… ကျွန်တော်လဲအချိန်မဆိုင်းတော့ပဲ ကွန်ဒုန်း လေးကို စနစ်တကျစွပ်ပြီးနန်းခြေရင်းမှာနေရာယူလိုက်ပါတယ်… ပြီးတော့ နန်းပေါင်လေးတွေကိုကိုင်ပြီးနည်းနည်းကားခိုင်းလိုက်တယ်… ။
ကျွန်တော်လဲ ပထမဆုံးဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိဘူး…ဒါပေမဲ့ ဟိုကားတွေကြည့်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံအရ ကျွန်တော့ ကိုယ်လေးကို နန်းကိုယ်ပေါ်မှောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော့ ဟာလေးနဲ့ နန်းရဲ့အကွဲကြောင်းလေးကို တေ့ပြီး အထက်အောက်ပွတ်ပေးနေလိုက်တော့နန်းဆီက မောသံသဲ့သဲ့လေးထွက်လာပါတယ်… ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲနည်းနည်းလေးထိုးသွင်းလိုက်တော့ ထိပ်ကလေးပဲဝင်တယ်… တစ်ခုခုခံနေတယ်ဗျ…ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ… အားနည်းနည်းသုံးရတော့မယ်လို့… နန်းကိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်ထိပ်ကလေးနဲ့ပဲ အဝင်အထွက်လုပ်ပေးနေလိုက်တော့ နန်း တိုးတိုးလေး ညီးလာပါတယ်…ကျွန်တော်လဲ နန်း စ်ိတ်တွေထနေတုန်း ကျွန်တော့ဟာလေးကို နည်းနည်းလေးအားစိုက်ပြီးဖိသွင်းလိုက်တော့… “အား နာတယ် … ကို …အရမ်းနာတယ်ကိုရယ်…” တဲ့…. ကျွန်တော်ကဂရုမစိုက်ပဲ…ပိုဝင်သွားအောင်ပိုအားစိုက်လိုက်တော့ နန်းက ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထားပြီး… “အရမ်းနာတယ်ကိုရယ်…နန်းကိုသနားပါUီး…” လို့မျက်ရည်ဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ပြောလာတော့လဲကျွန်တော်သနားသွားပြီး ကျွန်တော့ဟာလေးကို နည်းနည်းပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်…နန်းကကျွန်တော့ကိုကြည့်လိုကပြီး… “ကို …နန်းကိုစ်ိတ်ပျက်သွားပြီလားဟင်…” “မပျက်ပါဘူးနန်းရယ်…” “ကို့မျက်နှာလေးညှိုးသွားတယ်ကိုရယ်… နန်းလေ .. ကို့ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်ကိုရယ်… ” “…………..” “နန်းအရမ်းနာလို့ပါ…ကိုနန်းကြောင့် ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် နန်းမကြည့်ရက်ပါဘူး…” “… … …” “နန်းနာရင် နာပါစေ …ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်တော့နော်… ကို နော်… မျက်နှာလေးကို ဒီလိုတော့ မထားပါနဲ့ နော်…”တဲ့… ကျွန်တော်နန်းကို အရမ်းချစ်သွားပြီး နှဖူးလေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်မိတယ်… “နန်းရယ်…. ….. … …. ….” ကို သွင်းလိုက်မယ်နော်…နည်းနည်းတော့နာလိမ့်မယ်…” “အင်း … ” ဆိုပြီခေါင်းညှိမ့် ပြလိုက်တော့ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့ဟာလေးကို ဖိသွင်းလိုက်တော့တယ်…နန်းသနားပါတယ်ဗျာ… ။
ကျွန်တော်စိတ်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ထင်တယ် နာတယ်လို့မပြောပဲအံ့လေးကြိတ်ပြီး ကျွန်တော့လက်တွေကို ပဲ အတင်းဖြစ်ညှစ်ထားတယ်လေ…ကျွန်တော်လဲမြန်မြန်ပြီးသွားအောင် အားစိုက်ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်တော့ နန်းဆီက “အ…”ဆိုတဲ့အသံလေးထွက်လာပြီး… အဆုံးအထိဝင်သွားပါတော့တယ်… ကျွန်တော့ဟာလေးမှာလဲအရမ်းကိုကောင်းလွန်းတဲ့ နန်းရဲ့ အတွင်းနံရံတွေရဲ့တုန့်ပြန်မွုကိုကြောလေးတွန့်သွားအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျ… ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့ဟာလေးကိုအဆုံးအထိသွင်းလိုက် နည်းနည်းပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့ စည်းချက်ညီညီ လုပ်ပေးနေလိုက်တော့ … “အ… shhh … အား… ကိုရယ်…အာ…” ဆိုတက်နန်းရဲ့ညီးတွားသံလေးတွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာပါတော့တယ်… “နန်း… ” “ကို… …” “နာ သေးလားဟင်…” “ဟင့်အင်း… မနာတော့ဘူး…” “ကောင်းရောကောင်းလား…” “အင်း…ကိုရယ် …ဘာတွေမေးနေတာလဲ… တစ်မျိုးကြီးပဲကိုရယ်…” “ကိုတော့အရမ်းကောင်းတယ်နန်းရယ် … ကိုအားနဲ့ဆောင့်ပစ်လိုက်ချင်တယ် နန်းရယ်…” “အင်း… ကိုရယ်… ကိုလုပ်ချင်တာသာလုပ်ပါတော့…ကိုရယ်…” ကျွန်တော်လဲခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတာနဲ့ အားပါပါနဲ့ ဆောင့်ပစ်လိုက်တော့… “အား… ကို … အား …ကိုရယ်…” ဆိုပြီး ကျွန်တော့ကိုပဲ တတွတ်တွတ်ခေါ်နေတော့တာပဲ… ကျွန်တော်လဲ အရှိမ်ကိုနည်းနည်းမြှင့်လိုက်တော့ … နန်းက “အင်… … အား… ကို… ကို …နန်းပြီးတော့မယ်… အား… ပြီးကုန်ပြီ… အား… shhhh…. ” ဆိုပြီးနန်းပြီးသွားပါတယ်… နန်းပြီးသွားတော့ ကျွန်တော်လဲ စ်ိတ်ကိုလျော့ချလိုက်ပြီး…ခက်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပစ်လိုက်တယ်… ခဏကြာတော့ကျွန်တော့တစ်ကိုယ်လုံးကအကြောတွေတင်းလာပြီး ကျွန်တော်ပြီးသွားပါတော့တယ်…ကျွန်တော်လဲ တအားမောသွားပြီး ကျွန်တော့ဟာလေးကိုတောင်နန်းဟာလေးထဲကပြန်မထုတ်နိုင်တော့ပဲ နန်းပေါ်မှာပဲ မှောက်ရက်လေးအိပ်ပစ်လိုက်တော့တယ် …ပြီး။